Gott ist | Weltweite Kirche Gottes Schweiz | Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင် > ဘုရားသခင်ဖြစ်
အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးနိုင်လျှင်၊ ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ။ သင့်ကံကြမ္မာအရ “ကြီးကြီး” ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသလား။ လူတွေဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတာလဲ။ သို့မဟုတ် သေးငယ်သော်လည်း အရေးတကြီးဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်တွင် ကျွန်ုပ်ထံမှ ထွက်ပြေးခဲ့သော ကျွန်ုပ်၏ခွေးမှာ ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ငယ်​ငယ်​ကချစ်​သူနဲ့လက်​ထပ်​ရင်​ ဘာဖြစ်​မလဲ။ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်ကို ဘာကြောင့် ပြာစေတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားက သူ့ကို မေးချင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်- မင်းက ဘယ်သူလဲ။ ဒါမှမဟုတ် မင်းဘာဖြစ်တာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာလိုချင်လဲ။ အဲဒါအတွက် အဖြေက တခြားမေးခွန်းအများစုကို ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်အရာကို အလိုရှိသနည်းဟူမူကား၊ သူ၏ဖြစ်တည်မှု၊ သူ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံမေးခွန်းများဖြစ်သည်။ အခြားအရာအားလုံးကို၎င်းကဆုံးဖြတ်သည်- အဘယ်ကြောင့်စကြာဝဠာသည်၎င်း၏ပုံစံဖြစ်သနည်း။ ငါတို့သည် လူသားများကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည် အဘယ့်ကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ပုံသွင်းသင့်သနည်း။ အရင်က လူတိုင်းတွေးဖူးတဲ့ မူရင်းပုစ္ဆာပါ။ အနည်းဆုံး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ အဲဒါအတွက် အဖြေရနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သဘောသဘာဝကို စတင်နားလည်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသဘောသဘာဝကို သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဘယ်ကတဆင့် ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ကိုယ်​တိုင်​ပေါ်​ထွန်း​ခြင်း​အား​ဖြင့်။
ခေတ်တိုင်းကို တွေးခေါ်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်၊ သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်ကိုပြတော်မူ၏။ သူဘယ်သူလဲ၊ သူဘာဖြစ်လဲ၊ သူဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတောင် ငါတို့ကိုပြတယ်။ သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ဆက်ဆံရေးရှိသင့်သနည်း၊ ဤဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးတွင်မည်သို့သောဆက်ဆံရေးပုံစံရှိသင့်သည်ကိုလည်းပြောပြသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သော မည်သည့်အသိပညာအတွက်မဆို အခြေခံလိုအပ်ချက်မှာ နှစ်သက်လက်ခံနိုင်သော၊ နှိမ့်ချသောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လေးစားရမယ်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်ကိုပြတော်မူသည် (ဟေရှာယ ၆6,2) ဘုရားသခင်နှင့် ကိုယ်တော်၏နည်းလမ်းတော်များကို ချစ်တတ်ရန် သင်ယူပါမည်။ “ငါ့ကိုချစ်သောသူမည်သည်ကား၊ ငါ့စကားကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ထိုသူကို ချစ်တော်မူသဖြင့်၊ ငါတို့သည် သူ့ထံသို့လာ၍ သူနှင့်အတူ အသက်ရှင်လိမ့်မည်” (ယော ၁၊4,23) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေထိုင်လိုသည်။ သူဒီလိုလုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် ပိုရှင်းလင်းတဲ့အဖြေတွေကို အမြဲရရှိမှာပါ။
လူသားများသည်မိမိတို့၏မူလဇစ်မြစ်၊ သူတို့၏ဖြစ်တည်မှုနှင့်ဘဝရည်ရွယ်ချက်အတွက်အမြဲတမ်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ဒီရုန်းကန်မှုကဘုရားသခင်အားဘုရားသခင်ရှိသလား၊ သူ့အနှစ်သာရကဘာလဲ၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်လူတို့သည်များစွာသောပုံရိပ်နှင့်အတွေးအခေါ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။
ဖြစ်တည်မှု၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်ရှေးခေတ်လူ့ဆန္ဒရှိတည်ရှိနေသောဘာသာရေးအတွေးအခေါ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အ ဦး များတွင်ထင်ဟပ်။ လမ်းညွှန်များစွာမှလူတစ် ဦး သည်လူသားတည်ရှိမှု၏မူလအစနှင့်လူ့ဘ ၀ ၏လမ်းပြလမ်းစဉ်သို့ချဉ်းကပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်လူသား၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအမှန်တရားကိုအပြည့်အ ၀ နားမလည်နိုင်ခြင်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်နောက်ထပ်မေးခွန်းများကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဘုရားသခင်အားစကြ ၀ osာနောက်ကွယ်ရှိအင်အားစုများနှင့်ဥပဒေများအနေဖြင့်ဘုရားသခင်အား Pantheists များကမြင်ကြသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်၍ ကောင်းမကောင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုဘုရားသခင်အဖြစ်မယူဆကြပါ။
Polytheists ဘုရားသခငျ့သတ္တဝါများစွာကိုယုံကြည်ကြသည်။ ထိုဘုရားတစ်ပါးစီသည်ကူညီနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထိခိုက်နိုင်သည်၊ သို့သော်မည်သူမျှအကြွင်းမဲ့အာဏာမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်အားလုံးကိုကိုးကွယ်ရမည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ဂရိ - ရောမတို့၏ယုံကြည်မှုများအပြင်မျိုးနွယ်စုယဉ်ကျေးမှုများစွာ၏ ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ဘိုးဘေးကိုးကွယ်မှုများသည်ယဉ်ကျေးမှုများစွာရှိသူများဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးယုံကြည်သူများသည်ဘုရားသခင်အားအရာခပ်သိမ်း၏မူလအစ၊ ထောက်မသူနှင့်ဗဟိုအဖြစ်ယုံကြည်ကြသည်။ အကယ်၍ အခြားဘုရားများတည်ရှိခြင်းကိုအခြေခံကျကျဖယ်ထုတ်လိုက်ပါကဘိုးဘေးအာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတွင်စင်ကြယ်သောပုံစံဖြင့်ပြသသည့်အတိုင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားသုံးခုကအာဗြဟံကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဂျူးဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်အစ္စလာမ်။
သမိုင်း၌ရှိသောယဉ်ကျေးမှုတိုင်းသည်ဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအားကြီးသောသဘောကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘုရားသခင်ကိုငြင်းပယ်သောသံသယသည်အမြဲပင်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒ၊ နိဟီဝါဒ၊ ဖြစ်တည်မှုဝါဒ - ဤအရာအားလုံးသည်အကောင်းနှင့်အဆိုးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောအနန္တတန်ခိုးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသရုပ်ဆောင်ဖန်တီးသူမပါဘဲကမ္ဘာကြီးကိုအနက်ဖွင့်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤနှင့်အလားတူအတွေးအခေါ်များသည်ကျေနပ်ဖွယ်အဖြေမရရှိပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်သူတို့သည်အဓိကပြissueနာကိုရှောင်ကွင်းကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်သိလိုသောအရာမှာဘုရားသခင်နှင့်အဘယ်သို့နေထိုင်ရမည်၊ ဖန်ဆင်းရှင်၌မည်သည့်အရာ၊ သူလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အရာနှင့်ဖြစ်ပျက်ရမည့်အရာများဖြစ်သည်။
2. ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သို့ထုတ်ဖော်သနည်း။
သင့်ကိုယ်သင် ဘုရားသခင့်နေရာ၌ တွေးခေါ်မြော်မြင်ပါ။ သူတို့သည် လူသားများအပါအဝင် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ လူကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် (1. ကြွက် 1,26-27) သင်နှင့် အထူးဆက်ဆံရေးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသော စွမ်းရည်ကို ပေးတော်မူ၏။ ဒါမှ ကိုယ့်အကြောင်း လူတွေကို တစ်ခုခုပြောပြမှာ မဟုတ်ဘူးလား။ မင်းသူ့ဆီက ဘာလိုချင်လဲ သူ့ကိုပြောပါ သင်အလိုရှိသော ဘုရားသခင်ဆက်ဆံရေးသို့ မည်သို့ဝင်ရောက်ရမည်ကို သူ့ကိုပြသပါ။ ဘုရားသခင်သည် မသိနိုင်ဟု ယူဆသူတိုင်းသည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ သတ္တဝါထံမှ ပုန်းအောင်းနေသည်ဟု ယူဆသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း၊ သမိုင်းတွင်၊ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ပြသသောအရာကို သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။
စကြဝဠာကြီးကြီးကို နှစ်သက်သဘောကျပြီး ဘုရားသခင်ရှိနေကြောင်း၊ သူသည် သူ့လက်ထဲတွင် ပါဝါအားလုံးကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး အမိန့်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုကို အောင်နိုင်စေကြောင်း ဝန်မခံချင်နိုင်သလော။ ရောမ 1,20: "ဘုရားသခင်၏ မမြင်နိုင်သော သတ္တဝါ ဖြစ်သည့် ထာဝရ တန်ခိုးတော် နှင့် ဘုရား သခင် ဖြစ်သည် ကို တစ်စုံတစ်ယောက် က ရိပ်မိ ပါက ကမ္ဘာ ကို ဖန်ဆင်း ချိန် မှ စ၍ သူ၏ အမှုတော် များမှ ထင်ရှား သည် ။ ကောင်းကင်ကို လှမ်းမြင်ရသဖြင့် ဘုရင်ဒါဝိဒ်သည် လူသားကဲ့သို့ အရေးမပါသော အရာတစ်ခုကို ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အတွက် အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်– “ကောင်းကင်၊ မင်းလက်ညိုးနဲ့ မင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ လနဲ့ ကြယ်တွေကို ငါမြင်ရတဲ့အခါ မင်းထင်တဲ့လူက ဘာလဲ။ သူနှင့် လူသား၏သားကို သင်သည် စောင့်ရှောက်မည်လော။ (ဆာလံ 8,4-5) ။
ယောဘနှင့် ဘုရားသခင်ကို သံသယဝင်နေသော ကြီးစွာသောအငြင်းပွားမှုသည် ကျော်ကြားသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ အံ့ဖွယ်အမှုများ၊ သူ၏ အကန့်အသတ်မရှိသော အခွင့်အာဏာနှင့် ဉာဏ်ပညာကို ပြသသည်။ ဤတွေ့ဆုံမှုသည် ယောဘအား နှိမ့်ချမှုဖြင့် ပြည့်စေသည်။ ဘုရားသခင်၏မိန့်ခွန်းများကို ၃၈ ရာစုမှ ၄ ရာစုအတွင်း ယောဘကျမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။1. အခန်း။ ယောဘ ဝန်ခံပါတယ် ၊ မင်း အရာအားလုံးကို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ငါသိပြီး မင်းလုပ်ရမယ့်အရာက မင်းအတွက် အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ထို့ကြောင့် ငါသည် ပညာမဲ့စွာ ပြောတတ်သည်၊ ငါ့အတွက် လွန်စွာ ကြီးမြင့်သည်နှင့် ငါ နားမလည်ဘူး... ငါသည် မင်းပြောသံကြားမှသာ ကြားဖူးသည်၊ ယခုမူကား ငါ့မျက်စိသည် သင်တို့ကို မြင်ပြီ” (ယောဘ ၄2,2-3,5) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်ဆင်းခြင်းမှနေ၍ ဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းကို မြင်ရုံသာမက၊ ၎င်းမှ သူ၏ဖြစ်ခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ရလဒ်မှာ စကြာဝဠာ၌ ကြံစည်ခြင်း သည် ကြံစည်သူကို ကြို ဆိုခြင်း ၊ သဘာဝ တရား သည် ဥပဒေပြု သူကို ကြို ဆို သည် ၊ သတ္တဝါ အပေါင်းတို့ ၏ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ခြင်းသည် မြဲမြံ သည် ဟု ယူဆ ကာ ရုပ် ၏ တည်ရှိမှု သည် ဘဝ ကို ပေးလှူ သည် ဟု ယူဆ သည် ။
ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို အသက်ပေးသောအခါ၌ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်အရာကို ရည်ရွယ်ခဲ့သနည်း။ ပေါလုက အေသင်မြို့သားများအား “… လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင် နေထိုင်စေခြင်းငှာ လူတစ်မျိုးတည်းမှ ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး မည်မျှကြာကြာနေထိုင်ရမည်ကို ကန့်သတ်ချက်အတွင်းတွင် နေထိုင်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူကို တွေ့နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ခံစားနိုင်သည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီနှင့် မဝေးလှပေ၊ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်၌ အသက်ရှင်လျက်၊ ယက်ကန်းခတ်လျက် ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့တွင် အချို့သောကဗျာဆရာများကလည်း၊ ငါတို့သည် သူ၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်" (တမန်တော် ၁၇။ ၂၆-၂၈)။ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် Johannes ရေးသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှေးဦးစွာ ချစ်သောကြောင့် ချစ်သည်” (1. ဂျိုဟန် 4,19).
သံသယ ၀ င်သူများက“ ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုရင်သူဘာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူကမ္ဘာကြီးကိုမပြတာလဲ” ဟုမေးကြသည်။ ပထမမေးခွန်းကဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုလူသားတို့အားတစ်ခါမျှမပြခဲ့ပါဟုယူဆသည်။ ဒုတိယအချက်ကသူဟာလူသားလိုအပ်ချက်ကိုထုံထိုင်းစေတယ်ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့အဲဒါကိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ သမိုင်းကြောင်းအရသမ္မာကျမ်းစာတွင်သမိုင်းမှတ်တမ်းများစွာပါရှိသည်။ ပထမလူသားမိသားစု၏ အချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်သည်လူတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်လူအများစုကသူတို့အကြောင်းကိုဘာမှမသိချင်ကြဘူး။
ဟေရှာယဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “အမှန်စင်စစ်၊ သင်သည် ဝှက်ထားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏…” (ဟေရှာယ ၄5,15) လူတွေက သူနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တော့်နည်းလမ်းနဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်း သူတို့ရဲ့ အတွေးတွေ၊ လုပ်ရပ်တွေကတစ်ဆင့် သူ့ကိုပြသတဲ့အခါ ဘုရားသခင်က “ဖုံးကွယ်” လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဟေရှာယက ဤသို့ထပ်လောင်းပြောသည်– “ကြည့်ရှုလော့၊ သခင်ဘုရား၏လက်ရုံးတော်သည် မစနိုင်လောက်အောင် တိုတောင်းသည်မဟုတ်၊ နားလည်းမထောင်၊ မကြားနိုင်အောင် ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ သင်၏ကြွေးမြီများသည် ဘုရားသခင်နှင့်ခွဲခွာ၍ သင်၏အပြစ်များကို သင့်ရှေ့မှောက်တွင် ဖုံးကွယ်ထားလိုက်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် မကြားရကြ။” (ဟေရှာယ ၅9,1-2) ။
ဒါတွေအားလုံးက အာဒံနဲ့ ဧဝနဲ့ စတင်ခဲ့တာ။ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို ဖန်ဆင်းပြီး ပန်းပွင့်တဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ထားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူက သူမကို တိုက်ရိုက်စကားပြောတယ်။ သူအဲဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာ မင်းသိတယ်။ သူနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ သူတို့ကို ပြခဲ့တယ်။ အာဒံနှင့်ဧဝသည် ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းများတွင် မထားခဲ့ပါ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်လိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ (ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့်၊ အသက်ပင်မှ စားခြင်း) သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း ရှိ၊ မင်းက သစ်ပင်ကို မှားရွေးလိုက်တာ (1. မောရှေ ၂ နှင့် ၃)။ သို့သော် မကြာခဏ သတိမမူမိသည်မှာ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံကြောင်း သိထားခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်သည် သူတို့နှင့်စကားပြောဆိုသောအခါတွင်၊ “အရှင်ဘုရားသခင်သည် အေးချမ်းသောနေ့၌ ဥယျာဉ်၌ကြွလာတော်မူ၍၊ အာဒံနှင့်သူ၏မယားသည် ဥယျာဉ်၌ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှ သစ်ပင်များအောက်၌ ပုန်းအောင်းနေ၏” (1. ကြွက် 3,8).
ဒါဆို ဘယ်သူက ပုန်းနေတာလဲ။ ဘုရားမဟုတ်ဘူး! ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ လူများကား၊ အကွာအဝေး၊ သူနဲ့သူကြားက ခွဲခွာချင်ကြတယ်။ အဲဒီ့ကတည်းက ဒီအတိုင်းပဲ ကျန်နေခဲ့တာ။ သမ္မာကျမ်းစာသည် လူသားတို့အား ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် ဘုရားသခင်နှင့် လူသားတို့အား ထိုလက်ကို လွှဲပေးသည့်ပုံသက်သေများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ နောဧ၊ “ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဟောသူ” (2. ပေတရု ၂:၅) ဘုရားသခင် ကြွလာမည့် တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးကို နှစ်တစ်ရာပြည့်အောင် သတိပေးနေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးက မကြားရဘဲ ရေကြီးနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်။ အပြစ်ရှိသောသောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရဘုရားသည် မီးမုန်တိုင်းကြောင့် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး မီးရှူးမီးဖိုမှ မီးခိုးကဲ့သို့ “မီးရှူးမီးရှူး” အဖြစ် တက်လာသည်။1. မောရှေ ၁9,28) ဤသဘာဝလွန် ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုပင်လျှင် ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအများစုသည် ရွေးချယ်ခံရသောဣသရေလလူမျိုးအပေါ် ဘုရားသခင်၏လုပ်ရပ်များကို ဖော်ပြသည်။ အစ္စရေးတွေက ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကို နားမထောင်ချင်ဘူး။ "... ဘုရားသခင် ငါတို့ကို စကားမပြောပါစေနဲ့" ဟု လူများက အော်သည်။2. မောရှေ ၂၀:၁၉)။
အီဂျစ်၊ နိနေဝေ၊ ဘေဘီယွန်နှင့် ပါရှားတို့ကဲ့သို့ ကြီးကျယ်သော တန်ခိုးရှင်များ၏ ကံကြမ္မာတွင်လည်း ဘုရားသခင်သည် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် အမြင့်ဆုံးသော အုပ်စိုးရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောတတ်သည်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက ယုတ်မာနေခဲ့တယ်။ ပိုဆိုးတာက ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးကျွန်များစွာကို ဘုရားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကို ယူဆောင်ဖို့ကြိုးစားသူတွေရဲ့ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ ဟေဗြဲ ၁:၁-၂ က နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသို့ဆိုသည်– “ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်များအားဖြင့် ဘိုးဘေးတို့အား အကြိမ်များစွာ ကြိမ်ဖန်များစွာ မိန့်တော်မူပြီးမှ၊ ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ သားတော်အားဖြင့် ငါတို့အား မိန့်တော်မူသည်ကား…” ယေရှုခရစ်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာ၍ ဟောပြောခဲ့သည်။ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိတရားနှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်။ ရလဒ်? “သူသည် ဤလောက၌ရှိ၍ လောကကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော်လည်း လောကီသားတို့သည် မသိကြ။” (ယော 1,10) ကမ္ဘာနှင့်တွေ့ ဆုံခြင်းက သူ့ကိုသေစေခဲ့သည်။
လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင်ယေရှုသည် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာနှင့်ကရုဏာကိုဖော်ပြခဲ့သည်- "ယေရုရှလင်မြို့၊ ယေရုရှလင်မြို့၊ သင်သည် ပရောဖက်တို့ကိုသတ်၍၊ သင့်ထံသို့စေလွှတ်သောသူတို့ကို ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်! မင်းမလိုချင်ဘူး!" (မဿဲ ၂3,37) မဟုတ်ဘူး၊ ဘုရားသခင်က အဝေးမှာ မနေပါဘူး။ သမိုင်းမှာ သူ့ကိုယ်သူ ထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများစုက သူ့ကို မျက်လုံးမှိတ်ထားကြတယ်။
ဘုရားသခင်၏ဖြစ်တည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင့်ပြောဆိုချက်
ဒါကြောင့် သူထုတ်ပြတယ်။ 2. ကြွက် 3,14 မောရှေအမည်ဖြင့် “ငါဖြစ်မည်။ မောရှေသည် မီးမလောင်သော ချုံပုတ်တစ်ခု မီးလောင်နေသည်ကို မောရှေမြင်ခဲ့သည်။ ဤအမည်ဖြင့် သူသည် သူ့ကိုယ်သူ သတ္တဝါဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ အသက်ရှင်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ သူ၏ဖြစ်ခြင်း၏နောက်ထပ်သွင်ပြင်များကို သူ၏အခြားကျမ်းစာအမည်များတွင် ဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်က “ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် သန့်ရှင်းရမည်၊ ငါသည် သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊3. ကြွက် 11,45) ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ ဟေရှာယ ၅၅:၈ တွင် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်းလင်းစွာပြောပြသည်– “... ငါ့အကြံအစည်များသည် သင်၏အကြံအစည်များမဟုတ်၊ သင်၏နည်းလမ်းများသည် ငါ၏နည်းလမ်းများမဟုတ်” ဟူ၍ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ထက် မြင့်မားသောလေယာဉ်ပေါ်တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် လူသားပုံစံဖြင့် ဘုရားသခင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် သူ့ကိုယ်သူ “ဤလောက၏အလင်း” (ယော ၈း၁၂)၊ အာဗြဟံ၏ရှေ့တော်၌နေထိုင်သော “ငါ” ကဲ့သို့ (အခန်းငယ် ၅၈)၊ “တံခါး” အဖြစ် (ယော၊ 10,9“ကောင်းသောသိုးထိန်း” (အခန်းငယ် ၁၁)၊ “လမ်းနှင့်သမ္မာတရားနှင့်အသက်” အဖြစ် (ယော ၁၊4,6).
လုပ်ခြင်းသည် အနှစ်သာရနှင့် သက်ဆိုင်သည် သို့မဟုတ် ယင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကျင့်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောဆိုချက်တွေဟာ ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖြည့်စွက်ပြောဆိုချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟေရှာယ ၄ တွင် ဘုရားသခင်က ငါသည် “အလင်းကိုဖန်တီး၍ မှောင်မိုက်ကို ဖန်ဆင်းသည်” ဟုဆိုသည်။5,7; ငါသည် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေး၍ ဘေးဥပဒ်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့တာ။ ဖန်ဆင်းသောအရာကို ပိုင်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည်လည်း အနာဂတ်ကို ဟောကိန်းထုတ်သည်– “ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏၊ အခြားမည်သူမျှမရှိ၊ မည်သည့်အရာနှင့်မျှ မသက်ဆိုင်သည့် ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်သည်။ အစကတည်းက နောင်လာမည့်အရာများကို ငါကြေညာခဲ့ပြီး မဖြစ်သေးသည့်အရာများမဖြစ်မီကပင် ငါဆိုသည်– ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ ဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါကြံစည်သမျှကို ငါအလိုရှိ၏။” (ဟေရှာယ ၄6,9စာ-၁၀)။ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကကိုချစ်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ “အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” (ယောဟန်၊ 3,16) ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုအားဖြင့် ကလေးများကို သူ့မိသားစုထဲသို့ သွင်းပေးသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂1,7 ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်– “အောင်နိုင်သောသူသည် အလုံးစုံတို့ကို အမွေခံရလိမ့်မည်၊ ငါသည် သူ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၍၊ အနာဂတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယေရှုဤသို့မိန့်တော်မူသည်– “ကြည့်ရှုလော့၊ ငါသည် မကြာမီလာ၍ အသီးအသီး မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း ပေးဆောင်ခြင်းငှာ ငါ၏အကျိုးကို ငါပေးမည်။” (ဗျာဒိတ် ၂ ကော၊2,12).
ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ လူများ၏ဖော်ပြချက်
ဘုရားသခင်သည် မိမိအလိုဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် သူရွေးချယ်ထားသော လူများနှင့် အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိနေသည်။ ဤကျေးကျွန်များစွာသည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝအသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ချန်ထားခဲ့သည်။ “ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။5. ကြွက် 6,4) ဘုရားတစ်ဆူပဲရှိတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက monotheism ကို ထောက်ခံသည်။ (အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် တတိယအခန်းကို ကြည့်ပါ။) ဤနေရာ၌ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သော ဆာလံဆရာ၏စကားများစွာထဲမှ ဤအရာသည် "သခင်မဟုတ်လျှင် ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်း။ ငါတို့၏ဘုရားသခင်မဟုတ်လျှင် ကျောက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။" (ဆာလံ ၁8,32) ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်းသာ ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်၍ ကိုးကွယ်သူတို့အား ခွန်အားပေးတော်မူ၏။ ဆာလံကျမ်းများတွင် ဘုရားသခင်၏သဘောသဘာဝကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းများစွာရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပါ နှစ်သိမ့်မှုအရှိဆုံး ကျမ်းပိုဒ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 1. ဂျိုဟန် 4,16: "ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏..." 2. ပေတရု ၃:၉– “ထာဝရဘုရားသည် မည်သူ့ကိုမျှ မဆုံးရှုံးစေလိုသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၊ ကိုယ်တော်၏သတ္တဝါများ၊ ကိုယ်တော်၏သားသမီးများအတွက် ဘုရားသခင်၏ အကြီးမားဆုံးသောဆန္ဒကား အဘယ်နည်း။ ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် သူ့ထံသို့ အချည်းနှီးပြန်မလာခဲ့ပေ။5,11) ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ သိခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးပေးသင့်တယ်။
ဘုရားသခင်သည် “မြေကြီးကို အချည်းနှီးမဖြစ်ဘဲ ဆွဲထား” သည်ဟု ယောဘ ၂ ကဆိုသည်။6,7 ထွက် သူသည် ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းနှင့် လှည့်ပတ်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည့် စွမ်းအားများကို ညွှန်ကြားသည်။ မြေကြီးသားတို့အဘို့ အသက်နှင့်သေခြင်းတရားတို့သည် လက်တော်၌ရှိ၏– “သင်တို့မျက်နှာကို ကွယ်ထားလျှင် သူတို့သည် ထိတ်လန့်ကြကုန်၏၊ သူတို့အသက်ရှူလျှင် ကွယ်ပျောက်၍ မြေမှုန့်ဖြစ်သွားကြကုန်၏။ မြေကြီး၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။” (ဆာလံ ၁၀4,29စာ-၃၀)။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဘုရားသခင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင်ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ မေတ္တာရှိသော ဖန်ဆင်းရှင်သည် လူကို သူ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းကာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို အုပ်စိုးခွင့်ပေးတော်မူသည် (1. ကြွက် 1,26) မြေကြီးပေါ်၌ ဒုစရိုက်များ ပျံ့နှံ့သွားသည်ကို မြင်သောအခါ “မြေကြီးပေါ်မှာ လူတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကို ဝမ်းနည်း၍ စိတ်နှလုံး ညှိုးငယ်လျက်၊1. ကြွက် 6,6) နောဧနှင့် သူ့မိသားစုမှလွဲ၍ လူသားအားလုံးကို ဝါးမြိုသွားသည့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ၏ဆိုးသွမ်းမှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။1. ကြွက် 7,23) နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ဘိုးဘေးအာဗြဟံကို ခေါ်ပြီး “မြေကြီးသားအစဉ်အဆက်” ကောင်းချီးပေးမည့်သူနှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခဲ့သည်။1. မောရှေ ၁2,1-၃) အာဗြဟံ၏သားမြေးယေရှုခရစ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူတို့ကို ဖန်ဆင်းသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့် ပင်လယ်နီကိုဖြတ်၍ အီဂျစ်စစ်တပ်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်– “မြင်းနှင့် လူတို့ကို ပင်လယ်ထဲသို့ ပစ်ချတော်မူသည်” (2. မောရှေ ၁5,1) အစ္စရေးတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ၎င်း၏သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုနှင့် တရားမျှတမှုတို့ကို ပေါက်ကြားစေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် လူမျိုးခြားများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကတိထားရာပြည်မှ ကျွန်အဖြစ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည် (ယေဇကျေလ ၂၊2,23စာ-၃၁)။ သို့ရာတွင်၊ ကရုဏာတော်ရှိသော ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့၏အပြစ်များကို နောင်တရသူ၊ ဣသရေလလူမျိုးနှင့် အစ္စရေးမဟုတ်သူအားလုံးနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ထာဝရပဋိညာဉ်ဖွဲ့ရန် ကမ္ဘာသို့ ကယ်တင်ရှင်ကို စေလွှတ်မည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။9,20စာ-၂၁)။ နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်သည် သားတော်ယေရှုခရစ်ကို အမှန်တကယ်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုက “သားတော်ကိုမြင်၍ ယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေမည်အကြောင်း၊ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူကို ငါထမြောက်စေမည့် ငါ့ခမည်းတော်၏အလိုတော်ဖြစ်သည်” (ယော၊ ၆း၄၀)။ “ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကို ပဌနာပြုသောသူမည်သည်ကား ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်” ဟုဘုရားသခင်အာမခံခဲ့သည်။ (ရောမ၊ 10,13).
ယနေ့ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အသင်းတော်အား "လူမျိုးအပေါင်းတို့၏သက်သေခံချက်အတွက် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌" နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောရန် အခွင့်အာဏာပေးထားသည်။4,14) ယေရှုခရစ်တော် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင်၊ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်- အသင်းတော်အား ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ ပေါင်းစည်းရန်နှင့် ခရစ်ယာန်များထံ ဘုရားသခင်၏နက်နဲသောအရာများကို ဖော်ထုတ်ရန် (တမန်တော်များ တမန်တော်များ၊ 2,1-4) ။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်နှင့် လူသားတို့၏ဆက်ဆံရေးအကြောင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့သတင်းစကားက ဘုရားသခင်အကြောင်း၊ သူဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ သူဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ သူဘာလိုချင်သလဲ၊ သူစီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေအကြောင်း နောက်ထပ်လေ့လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏အဖြစ်မှန်၏ ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံကို မည်သူမျှနားမလည်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ပြည့်စုံခြင်းကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့် အနည်းငယ်စိတ်ပျက်သွားပြီး ယောဟန်သည် ယေရှု၏အသက်တာမှတ်တမ်းကို ဤသို့ပိတ်ဆိုခဲ့သည်– “ယေရှုပြုသောအခြားအမှုများစွာရှိသေးသည်။ ရေးရမည့်စာအုပ်များကို ကမ္ဘာက ဆုပ်ကိုင်ထားမည်မဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်” (ယော၊ ၂1,25).
•မည်သည့် Spatial ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မ
• အဘိညာဉ် (စကြဝဠာအထက်၌ ရပ်လျက်)၊
• နိစ္စ (သဠာယတန)။
တစ်ချိန်က ဘာသာတရား ပါမောက္ခတစ်ဦးသည် သူ၏ပရိသတ်အား ဘုရားသခင်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်သော အကြံဥာဏ်ပေးရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူသည် ကျောင်းသားများကို စက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုတွင် လက်ချင်းချိတ်ကာ မျက်လုံးမှိတ်ခိုင်းသည်။ “အခု အနားယူပြီး ဘုရားသခင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ” လို့ သူက ပြောပါတယ်။ "သူ ဘယ်လိုပုံစံလဲ၊ သူ့ထီးနန်းက ဘယ်လိုပုံစံလဲ၊ သူ့အသံက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။" မျက်စိမှိတ်ပြီး လက်ချင်းချိတ်ကာ ကျောင်းသားများသည် ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် အချိန်အတော်ကြာ ထိုင်ကာ ဘုရားရုပ်တုများကို အိပ်မက်မက်ကြသည်။ "ဒါဆို?" ပါမောက္ခကို မေးတယ်။ "မင်း သူ့ကိုတွေ့လား? မင်းတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ပုံရိပ်တစ်ချို့ ရှိသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူး" လို့ ပါမောက္ခက ဆက်ပြောပါတယ်။ မဟုတ်ဘူး! သူ့အတွေးထဲက သူမကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ "အဲဒါက ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ဥာဏ်ပညာနဲ့ သူ့ကို အပြည့်အဝ ဆုပ်ကိုင်လို့ မရဘူး။ ဘုရားသခင်ကို ဘယ်သူမှ လုံးလုံးလျားလျား ဆုပ်ကိုင်လို့ မရဘူး။ ဘုရားသခင်က ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး ငါတို့က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေပဲ" အလွန်နက်နဲသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ဘုရားသခင်သည် မည်သူနှင့် မည်သည်ကို သတ်မှတ်ရန် အဘယ်ကြောင့် အလွန်ခက်ခဲသနည်း။ ထိုပါမောက္ခက ဖော်ပြခဲ့သော ကန့်သတ်ချက်တွင် အဓိကအခက်အခဲမှာ- လူသားသည် သူ၏အတွေ့အကြုံအားလုံးကို သူ၏အာရုံငါးပါးဖြင့် ပြုလုပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားနားလည်မှုတစ်ခုလုံးကို ဤအရာနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘုရားသခင်သည် ထာဝရဖြစ်သည်။ သူသည် အနန္တဖြစ်သည်။ သူသည် မမြင်နိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံခံစားမှုများဖြင့် ကန့်သတ်ထားသော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သော အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဖော်ပြချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သူဟာမကြာခဏကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့သည်။ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာကျမ်းစာကသူ့အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုဖော်ပြသည်။ သူသည်သမ္မာကျမ်းစာမှလူအချို့အားနည်းမျိုးစုံဖြင့်လည်းထင်ရှားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ သူ၏ပြည့်ဝစုံလင်မှုအားလုံးကိုကြည့်။ မရ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါများသည်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးတွင်နားလည်နိုင်သောအသုံးအနှုန်းများဖြင့်သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်သဘောတရားနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားများကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်ဤစကားများသည်ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။
ဥပမာ၊ သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်ကို “ကျောက်” နှင့် “ရဲတိုက်” ဟုခေါ်သည် (ဆာလံ ၁8,3) “ဒိုင်းလွှား” (ဆာလံ ၁၄4,2) "လောင်သောမီး" (ဟေဗြဲ ၁2,29) ဘုရားသခင်သည် ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများနှင့် တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ၎င်းတို့သည် လူသားဆန်စွာမြင်နိုင်၊ နားလည်နိုင်သောအရာကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏ အရေးကြီးသောရှုထောင့်များထံ ချဉ်းကပ်စေသည့် သင်္ကေတများဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် လူသားအသွင်သဏ္ဍာန်ကို ဘုရားသခင်ထံ အသိအမှတ်ပြုကြောင်းပင် ဖော်ပြထားပြီး၊ သူ၏ စရိုက်လက္ခဏာနှင့် လူသားနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြသည်။ ကျမ်းပိုဒ်များက ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ဖော်ပြသည် (ဖိလိပ္ပိ ၃:၂၁); ခေါင်းတစ်လုံးနှင့် ဆံပင်တစ်ခု (ဗျာ 1,14); မျက်နှာတစ်ခု (1. မောရှေ ၁2,31; 2. မောရှေ ၁3,23; ဗျာဒိတ် ၁:၁၆); မျက်စိနှင့် နား (5. ကြွက် 11,12; ဆာလံ ၁၀4,16; epiphany 1,14); နှာခေါင်း (1. ကြွက် 8,21; 2. မောရှေ ၁5,8); ပါးစပ် (မဿဲ 4,4; epiphany 1,16); နှုတ်ခမ်း (ယောဘ 11,5); အသံ (ဆာလံ ၆8,34; epiphany 1,15); လျှာနှင့် ထွက်သက် ( Isaiah 30,27:28-4 ); လက်၊ လက်၊ လက်ချောင်းများ (ဆာလံ ၄4,3-4; ၂၈.၃9,14; ဟီး 1,3; 2. ရာဇဝင်ချုပ် ၁8,18; 2. မောရှေ ၁1,18; 5. ကြွက် 9,10; ဆာလံ ၈:၄; epiphany 1,16); ပခုံးများ (ဟေရှာယ 9,5); ရင်သား (ဗျာ 1,13); ရွှေ့ (2. မောရှေ ၁3,23); တင်ပါး (ယေဇ 1,27); ခြေထောက် (ဆာလံ ၁8,10; epiphany 1,15).
ဘုရားသခင်နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ သမ္မာကျမ်းစာက လူ့မိသားစုဘဝကနေ နှုတ်ယူထားတဲ့ ဘာသာစကားကို အသုံးပြုတယ်။ ဆုတောင်းရန် ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင်သည်– “ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါတို့အဘ” (မဿဲ 6,9) သားသမီးတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးသလို မိခင်က သူ့လူတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးချင်တာ (ဟေရှာယ ၆6,13) သခင်ယေရှုသည် သူ၏ညီတော်များကို ဘုရားသခင်ရွေးချယ်သောသူများကို ခေါ်ရန် မရှက်ပါ။ (ဟေဗြဲ၊ 2,11); သူသည် သူမ၏အစ်ကိုအကြီးဆုံး၊ သားဦးဖြစ်သည် (ရောမ 8,29) ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂1,7 ဘုရားသခင်က ကတိပြုသည်– “အောင်နိုင်သောသူသည် အရာအားလုံးကို အမွေခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငါသည် သူ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သူသည် ငါ့သားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဘုရားသခင်က ခရစ်ယာန်တွေကို သူ့သားသမီးတွေနဲ့ မိသားစုနှောင်ဖွဲ့ဖို့ ခေါ်တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤနှောင်ကြိုးကို လူသားများ ဆုပ်ကိုင်နိုင်သော နားလည်မှုဖြင့် ဖော်ပြသည်။ သူမသည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သူဟု ခေါ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးသော ဝိညာဉ်ရေးအစစ်အမှန်ကို ပန်းချီဆွဲသည်။ ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့အား အနာဂတ်ဘုန်းကြီးသော ဝိညာဉ်ရေးအမှန်တရား၏ အပြည့်အဝ နယ်ပယ်ကို မပေးပေ။ သူ၏သားသမီးများအဖြစ် ဘုရားသခင်နှင့် အဆုံးစွန်သောဆက်ဆံရေး၏ ရွှင်လန်းမှုနှင့် ဂုဏ်ကျက်သရေသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကန့်အသတ်ရှိသော ဝေါဟာရဖော်ပြနိုင်သည့်ထက် များစွာကြီးမားပါသည်။ ဒါကြောင့် ပြောပြပါ။ 1. ဂျိုဟန် 3,2: "ချစ်ခင်ရပါသော၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း၊ ငါတို့သည် အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကို မထင်ရှားသေး။ သို့သော်လည်း ငါတို့သိသည်ကား၊ ထင်ရှားလာသောအခါ၊ ငါတို့သည် သူနှင့်တူကြလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ထိုသူကို မြင်ကြလိမ့်မည်။" ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်၊ ကယ်တင်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ “အပြည့်အ၀သိ” နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပေါလုက “မှန်ထဲမှာ မှောင်နေတဲ့ ပုံကို အခုမြင်နေရတယ်” လို့ ပေါလုက “ဒါပေမယ့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တော့ အခု ငါ နဲနဲတော့ သိသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့် ငါသိလာလိမ့်မယ်” (1. ကောရိန္သု ၁3,12).
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖွင့်ပြခြင်းသည် ဖန်ဆင်းခြင်း၊ သမိုင်းနှင့်ကျမ်းစာအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူကိုယ်တိုင် လူဖြစ်လာသည်ဟူသောအချက်ဖြင့် လူသားအား သူ့ကိုယ်သူ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ ဖြစ်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် နေထိုင်၊ အမှုထမ်း၊ သွန်သင်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း၏ အကြီးမားဆုံးသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ “နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူဇာတိဖြစ်၏ (ယော 1,14) ယေရှုသည် မြင့်မြတ်သောအခွင့်ထူးများမှ လွတ်မြောက်ပြီး လူသားတစ်ဦးဖြစ်လာပြီး အပြည့်အဝလူသားဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အသေခံပြီး၊ သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့ပြီး၊ သူ၏အသင်းတော်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းသည် သူ့ခေတ်လူများကို ထိတ်လန့်စေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏ဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ဍာန်သည် နောက်အခန်းနှစ်ခန်းတွင် မြင်တွေ့ရမည့်အတိုင်း မဝေးလှသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ယေရှုက တပည့်တော်များအား “ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်၏” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ (ယော ၁၄:၉)။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၌ မိမိကိုယ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဂျူးဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်။ ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားသုံးခုစလုံးတွင်အာဗြဟံကိုဖခင်ဟုရည်ညွှန်းသည်။ အာဗြဟံသည်သူ၏တစ်ခေတ်တည်းသားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရေးကြီးသောနည်းတစ်ခုမှာသူသည်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုသာကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိသည်ဟုယုံကြည်သောကိုးကွယ်မှုသည်စစ်မှန်သောဘာသာတရား၏အစကိုရည်ညွှန်းသည်။
အာဗြဟံသည် စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သူ အာဗြဟံသည် တစ်ခုတည်းသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ယဉ်ကျေးမှုတွင် မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ရာစုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက်၊ ဘုရားသခင်သည် ရှေးဣသရေလလူမျိုးအား ဤသို့သတိပေးသည်– “သင်၏ဘိုးဘေးများသည် ဥဖရတ်မြစ်တဘက်ကမ်းတွင် တေရ၊ အာဗြဟံနှင့် နာခေါ်၏ဖခင်တို့နေထိုင်ကြပြီး အခြားသောဘုရားများကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသည်။ ခါ​နာန်​အမျိုး​သား​ကို ကျား​မ​ပွား​များ​ပါ​စေ။” (ယောရှု ၂4,2-3) ။
အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်မခေါ်မီ၊ သူ၏ဘိုးဘေးများသည် ဟာရန်တွင် နေထိုင်ကြပေမည်။ နှစ်ပါးစလုံးတွင် ဘုရားများစွာကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Ur တွင်၊ Sumerian လနတ်ဘုရား Nanna အား ရည်စူးထားသော ကြီးမားသော ziggurat တစ်ခုရှိသည်။ ဥရမြို့ရှိ အခြားဘုရားကျောင်းများသည် An၊ Enlil၊ Enki နှင့် NingaL တို့၏ ကိုးကွယ်ရာဘာသာများကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဘုရားသခင် အာဗြဟံသည် ဤများစွာသော ယုံကြည်ခြင်းလောကမှ ထွက်မြောက်သွားသည်- "မင်းရဲ့ အမိနိုင်ငံကနေ ထွက်ပြီး မင်းရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကနေ မင်းအဖေရဲ့ အိမ်ကနေ ငါပြချင်တဲ့ တိုင်းပြည်ကို သွားလိုက်ပါ။ မင်းနဲ့ငါ မင်းကို ကြီးမြတ်တဲ့လူဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တယ်...” (1. မောရှေ ၁2,1-2) ။
အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို နာခံပြီး ထွက်သွားသည် (း၄)။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အာဗြဟံအား မိမိကိုယ်မိမိ ဖော်ပြသောအခါတွင် ဣသရေလနှင့် ဘုရားသခင် ဆက်ဆံရေး စတင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံနှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် အာဗြဟံ၏သား ဣဇာက်နှင့် ပဋိညာဉ်ကို သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဣဇာက်၏သား ယာကုပ်နှင့်လည်း ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့သည်။ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်နှင့် ယာကုပ်တို့သည် တစ်ဆူတည်းသော စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဒါကလည်း သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးရင်းချာတွေနဲ့ ကွဲပြားစေတယ်။ အာဗြဟံအစ်ကို နာခေါ်၏မြေး လာဗန်သည် အိမ်တော်ဘုရားများ (ရုပ်တုများ) ကို သိရှိဆဲဖြစ်သည်။1. မောရှေ ၁1,30-35) ။
ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာပြီးနောက် ယာကုပ် (အစ္စရေးဟုအမည်ပြောင်း) သည် သူ၏သားသမီးများနှင့်အတူ အီဂျစ်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အီဂျစ်ပြည်တွင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အီဂျစ်တွင်လည်း ပေါများသည်ဟု အသံထွက်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏အဘိဓာန် (Eltville 1990) တွင်ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “[အီဂျစ်၏ဘာသာတရား] သည် ပြည်ပမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောနတ်ဘုရားအများအပြား (Baal, Astarte, the grumpy Bes) များကြားတွင် ကွဲလွဲမှုများမပါဝင်ဘဲ တစ်ဦးချင်းအမည်ခံဘာသာတရားများ၏စုပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်တည်လာသော အမျိုးမျိုးသော အယူအဆများ ... ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် ဘုရားများသည် အချို့သော နိမိတ်လက္ခဏာများဖြင့် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သော တိရစ္ဆာန်များထဲတွင် ပေါင်းစည်းကြသည် (pp. 17-18)။
အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် များပြားသော်လည်း၊ အစ္စရေးတွေ အီဂျစ်ပြည်ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဦးတည်တဲ့ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ ဘုရားသခင် ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုးနှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့လေ၏။ ဤအဖြစ်အပျက်များက ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၊ လူသားအား ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ပေါ်ထွန်းခြင်းမှာ အမြဲတမ်း တစ်ခုတည်းသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်နှင့် ယာကုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်အဖြစ် မောရှေအား မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားစေသည်။ သူကိုယ်တိုင်ပေးသောအမည် ("ငါဖြစ်မည်" သို့မဟုတ် "ငါ"၊ 2. ကြွက် 3,14) ဘုရားသခင်ပြုသည့်အတိုင်း အခြားဘုရားများ တည်ရှိခြင်းမရှိဟု အကြံပြုထားသည်။ ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ သင်မဟုတ်ဘူး!
ဖာရောသည်Israelitesသရေလလူတို့ကိုမလွှတ်လိုသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အီဂျစ်ပြည်ကိုကပ်ဘေးဆယ်ခုကျစေခဲ့သည်။ ဒီကပ်ဘေးအတော်များများဟာအီဂျစ်နတ်ဘုရားတွေရဲ့တန်ခိုးမရှိကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြတယ်။ ဥပမာ၊ အီဂျစ်နတ်ဘုရားများထဲမှဖားခေါင်းတစ်လုံးရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ဘားဘေးသည်ဤဘုရား၏ယဉ်ကျေးမှုကိုရယ်စရာဖြစ်စေသည်။
ဘေးဒဏ်ဆယ်ပါး၏ဆိုးကျိုးများကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်တွင်ပင် ဖာရောဘုရင်သည် ဣသရေလလူတို့ကို လွှတ်ရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အဲဒီအခါ ဘုရားသခင်က အီဂျစ်စစ်တပ်ကို ပင်လယ်ထဲမှာ ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။2. မောရှေ ၁4,27) ဤလုပ်ရပ်သည် အီဂျစ်ပင်လယ်နတ်ဘုရား၏ စွမ်းအားမဲ့မှုကို ပြသသည်။ အောင်ပွဲသီချင်းများ သီဆိုခြင်း (2. မောရှေ ၁5,1(၂၁) ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကြကုန်၏။
စစ်မှန်သောဘုရားသခင်သည်ထပ်မံတွေ့ ရှိ၍ ရှုံးသည်
အဲဂုတ္တုပြည်မှ၊ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့ကို သိနာမြို့သို့ပို့ဆောင်ပြီး ပဋိညာဉ်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၏ ပထမတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူတပါးတည်းသာ ကိုးကွယ်ရခြင်းဖြစ်သည်- "ငါ့မှတပါး အခြားဘုရားမရှိစေရ" (2. မောရှေ ၂၀:၃)။ ဒုတိယပညတ်တွင် ရုပ်တုဆင်းတုနှင့် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကို တားမြစ်သည် (အခန်းငယ် ၄-၅)။ မောရှေသည် ဣသရေလလူတို့ကို ရုပ်ပုံကိုးကွယ်ခြင်း၌ အရှုံးမပေးစေရန် အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့သည်။5. ကြွက် 4,23နှစ်ဆယ် 7,5; 12,2-3; ၂၈.၃9,15စာ-၂၀)။ ကတိထားရာပြည်ကို ရောက်တဲ့အခါ အစ္စရေးတွေ ခါနနိဘုရားတွေနောက်ကို လိုက်ဖို့ သွေးဆောင်ခံရမယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။
ဆုတောင်းခြင်းအမည် Sh'ma (ဟေဗြဲ "ကြားပါ!"၊ ဤဆုတောင်းချက်၏ပထမစကားလုံးပြီးနောက်) သည် ဣသရေလလူမျိုး၏ဘုရားသခင်အပေါ် ကတိကဝတ်ကိုပြသသည်။ ဤသို့အစပြုသည်– “ဣသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့၊ ထာဝရ ဘုရားသည် ငါတို့၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားတစ်ပါးတည်းသာလျှင် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ချစ်လော့” (5. ကြွက် 6,4စာ-၅)။ သို့ရာတွင်၊ ဣသရေလသည် EI (စစ်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်နိုင်သော စံအမည်) အပါအဝင် ခါနနိနတ်ဘုရားများအတွက် ဗာလ၊ ဒါဂွန်နှင့် Asthoreth (နတ်ဘုရားမ Astarte သို့မဟုတ် Ishtar) အပါအဝင် ခါနာန်နတ်ဘုရားများထံ အကြိမ်ကြိမ်ကျဆုံးသည်။ အထူးသဖြင့် ဗာလဘာသာတရားသည် အစ္စရေးလူမျိုးအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ သူတို့သည် ခါနာန်ပြည်ကို လက်အောက်ခံသောအခါ စပါးရိတ်သိမ်းမှုကောင်းကို မှီခိုနေရသည်။ မုန်တိုင်းနတ်ဘုရား ဗာလအား သားဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ကိုးကွယ်ကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းကျမ်းစာစွယ်စုံကျမ်း– "၎င်းသည် မြေနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏မျိုးပွားမှုအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသောကြောင့် မွေးဖွားခြင်းအယူဝါဒသည် ရှေးခေတ်အစ္စရေးကဲ့သို့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကျေးလက်များဖြစ်သော၊ စီးပွားရေးတွင် လွှမ်းမိုးမှုရှိရမည်" (အတွဲ ၄၊ စာမျက်နှာ ၁၀၁)။
အစ္စရေးလူတွေကို သူတို့ရဲ့အယူဖောက်ပြန်မှုကနေ နောင်တရဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ပရောဖက်တွေက သတိပေးထားတယ်။ ဧလိယက လူများကို ဤသို့မေးသည်– “သင်တို့သည် နှစ်ဖက်စလုံး၌ မည်မျှကြာအောင် အားလျော့သနည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်မှန်လျှင် သူ့နောက်သို့ လိုက်လော့။1. ဘုရင်များ ၁8,21) ဘုရားသခင်သည် ဧလိယ၏ဆုတောင်းချက်ကို ဖြေကြားပေးသည်။ လူတို့သည် “သခင်သည် ဘုရားသခင်၊ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏” (အခန်းငယ် ၃၉)။
ဘုရားသခင်သည် အလုံးစုံသောဘုရားတို့တွင် အကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားအဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ “ငါသည် သခင်ဘုရားဖြစ်၏၊ အခြားမည်သူမျှမရှိ၊ ပြင်ပဘုရားမရှိ” (ဟေရှာယ ၄။5,5) “ငါ့ရှေ့၌ ဘုရားသခင်မရှိ၊ ထို့ကြောင့် ငါ့နောက်၌ အဘယ်သူမျှမရှိရ။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ငါမှတပါး ကယ်တင်ရှင်မရှိ” (ဟေရှာယ ၄3,10-11) ။
ဂျူးဘာသာ - တင်းကြပ်စွာ monotheistic
ယေရှုခေတ်က ဂျူးဘာသာတရားသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု (ဘုရားများစွာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော်လည်း ဘုရားတစ်ပါးကို အကြီးမြတ်ဆုံးဟု မှတ်ယူခြင်း) သို့မဟုတ် monoiatric (ဘုရားတစ်ဆူတည်း၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုသာ ခွင့်ပြုသော်လည်း အခြားတစ်ပါးကို တည်ရှိနေသည်ဟု ယူဆခြင်း) မဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ဆူတည်းသောဘုရား)။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ Theological Dictionary အရ၊ ဂျူးများသည် ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းကို ယုံကြည်ခြင်းမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှ စည်းလုံးခြင်းမရှိဘဲ (အတွဲ ၃၊ စာမျက်နှာ ၉၈)။
ယနေ့အချိန်အထိ ရှမာရွတ်ဆိုခြင်းသည် ဂျူးဘာသာတရား၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှင်ဘုရား Akiba (အာဇာနည် ကွယ်လွန်သည်။ 2. ရာစု အေဒီ) Sh'ma ကို ဆုတောင်းစဉ် ကွပ်မျက်ခြင်း ခံရသည်ဟု ဆိုကာ ကြိမ်ဖန်များစွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ 5. ကြွက် 6,4 "တစ်ယောက်တည်း" ဟူသော စကားလုံးဖြင့် နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ထုတ်ပြောခဲ့သည်။
ကျမ်းပြုဆရာတစ်ဦးသည် ယေရှုအား အကြီးမြတ်ဆုံးပညတ်တော်ကား အဘယ်နည်းဟု မေးသောအခါ၊ ယေရှုက “ဣသရေလအမျိုး၊ ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား သခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိတော်မူကြောင်းကို နားထောင်၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချစ်ရမည်။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့်။” ( မာကု ၁၂:၂၉-၃၀ ) ကျမ်းပြုဆရာက “ဆရာ၊ သင်ပြောတာမှန်တယ်။ သူသည် တစ်ဆူတည်းဖြစ်၍ ကိုယ်တော်မှတပါး အခြားမရှိပါ…” (း၃၂)။
လာမည့်အခန်းတွင် သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းသည် ဓမ္မသစ်အသင်းတော်၏ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပြီး ကျယ်ပြန့်စေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါမည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ခမည်းတော်နှင့် တစ်သားတည်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို အတည်ပြုသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ Theological Dictionary တွင် အလေးပေးဖော်ပြသည်- "[ဓမ္မသစ်] ခရစ်ယာန်ဘာသာအားဖြင့်၊ အစောပိုင်းခရစ်ယာန် monotheism သည် ပေါင်းစည်း၍ မတုန်လှုပ်ဘဲ ... ခရစ်ဝင်ကျမ်းများအရ၊ ယေရှုသည် monotheistic အယူဝါဒကိုပင် ပြင်းထန်စေသည်" (အတွဲ 3၊ p. 102)။
ခရစ်တော်၏ရန်သူများပင်လျှင် “အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် သစ္စာစောင့်သိ၍ မည်သူ့ကိုမျှ မမေးမလျှောက်ပါနှင့်၊ လူတို့၏ဂုဏ်အသရေကို မထီမဲ့မြင်ပြု၍ ဘုရားသခင်၏လမ်းတော်မှန်ကို သွန်သင်တော်မူသည်” (း၁၄)။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ယေရှုသည် “ဘုရားသခင်၏ခရစ်တော်ဖြစ်သည်” (လု 9,20) “ခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူသောသူ” (လုကာ ၂၃:၃၅)။ သူသည် “ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်” (Johannes) ဖြစ်သည်။ 1,29) နှင့် "ဘုရားသခင်၏မုန့်" (ယောဟန် 6,33) နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သော ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ (ယော 1,1) သခင်ယေရှုပြောခဲ့သော အရှင်းဆုံးသော တစ်ခုတည်းသော အယူအဆကို မာကုတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ 10,17စာ-၁၈။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့ကို “သခင်ကောင်း” ဟု ခေါ်ဆိုသောအခါ ယေရှုက “ငါ့ကို ဘာကောင်းလို့ ခေါ်တာလဲ။ ဘုရားသခင်ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး” လို့ ပြန်ဖြေတယ်။
ဧဝံဂေလိတရားဟောရန်နှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ၏တပည့်ဖြစ်စေရန် သူ၏အသင်းတော်ကို သခင်ယေရှုက တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည် (မဿဲ ၂8,18စာ-၂၀)။ ထို့ကြောင့် သူမသည် များမကြာမီတွင် များပြားလှသော ယဉ်ကျေးမှု၏ လွှမ်းမိုးမှုခံရသော လူတို့အား တရားဟောခဲ့သည်။ ပေါလုနှင့်ဗာနဗတို့သည် လုတ္တရမြို့၌ အံ့ဖွယ်အမှုများကို ဟောပြောပြီး နိမိတ်လက္ခဏာများကို လုပ်ဆောင်သောအခါ၊ မြို့သားတို့၏ တုံ့ပြန်မှုမှာ ပေါလုပြုသောအယူကို လူများမြင်သောအခါတွင်၊ ငါတို့ထံသို့ ဆင်းလာ၍ ဗာနဗဇု၊4,11စာ-၁၂)။ Hermes နှင့် Zeus တို့သည် ဂရိ pantheon မှ နတ်ဘုရားနှစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဂရိနှင့် ရောမပန်သီယွန် နှစ်မျိုးလုံးကို ဓမ္မသစ်ကမ္ဘာတွင် လူသိများပြီး ဂရိ-ရောမနတ်ဘုရားများ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ထွန်းကားခဲ့သည်။ ပေါလုနှင့်ဗာနဗတို့က “ငါတို့သည် သင်တို့ကဲ့သို့ သေတတ်သောလူများဖြစ်ကြပြီး သင်တို့သည် ဤမိစ္ဆာဘုရားများမှ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ လွှဲအပ်ခြင်းငှာ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုလည်းကောင်း၊ ပင်လယ်နှင့်၎င်းတို့၌ရှိသော အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ဦးထုပ်ဆောင်းစေခြင်းငှာ သင်တို့အား ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောတော်မူ၏” (အခန်းငယ် ၁၅)။ ဒါတောင်မှ လူတွေက သူတို့အတွက် မနစ်နာအောင် တားဖို့ ခက်တယ်။
အေသင်မြို့၌ ပေါလုသည် “မသိသောဘုရားသခင်အား” အပ်နှံထားသော ယဇ်ပလ္လင်များစွာကို တွေ့ရှိခဲ့သည် (တမန်တော် ၁။7,23) သူသည် အေသင်မြို့သားတို့အား မွန်မြတ်သောအယူဝါဒဆိုင်ရာ တရားဒေသနာအတွက် ဤယဇ်ပလ္လင်ကို "ချိတ်" အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Ephesus တွင်၊ Artemis (Diana) ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုသည် ရုပ်တုများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဖြင့် လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ပေါလုသည် စစ်မှန်သော တစ်ပါးတည်းသော ဘုရားသခင်ကို ဟောပြောပြီးနောက်၊ ထိုကုန်သွယ်မှု ရပ်တန့်သွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ခံစားခဲ့ရသော ရွှေပန်းထိမ်ဆရာ Demetrius က “ဤပေါလုသည် ခိုးယူ၍ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ကာ လက်နှင့်လုပ်သောအရာသည် ဘုရားမဟုတ်” ဟု စောဒကတက်ခဲ့သည် (တ ၁၉:၂၆)။ တစ်ဖန် ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တစ်ဦးသည် လူလုပ်ရုပ်တုများ၏ အချည်းနှီးဖြစ်မှုကို ဟောကြားပြန်သည်။ အဟောင်းကဲ့သို့ပင်၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းသာဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာထားသည်။ တခြားဘုရားတွေ မဟုတ်ဘူး။
ပေါလုသည် “ဤလောက၌ ရုပ်တုမရှိ၊ ဘုရားမှတစ်ပါး အခြားတစ်ပါးမရှိ” ကြောင်း သူသိကြောင်း ကောရိန္သုမြို့မှ ခရစ်ယာန်များကို ပေါလု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြသည်။ (1. ကောရိန္သု 8,4).
Monotheism သည်ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်နှစ်မျိုးလုံးကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ယုံကြည်သူများ၏ဖခင်အာဗြဟံသည် polytheistic လူ့အဖွဲ့အစည်းမှဘုရားသခင်ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်မောရှေနှင့်Israelသရေလတို့အားမိမိကိုယ်ကိုဖွင့်ပြ။ ကိုယ်ပိုင်ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုတည်းအတွက်ပဋိညာဉ်တရားကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က monotheism ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ဘုရားကျောင်းကိုသူတည်ထောင်ခဲ့သည်မှာစင်ကြယ်သော monotheism ကိုမကိုယ်စားပြုသောယုံကြည်ချက်များကိုအစဉ်တစိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းလက်ထက် မှစ၍ ဘုရားသခင့်အမှုတော်သည်ကာလကြာရှည်စွာဟောကြားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ“ သခင်တစ်ပါးတည်း” ဖြစ်သည်။
4. ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၌ ထင်ရှားသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက“ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းရှိတော်မူ၏” ဟုသွန်သင်သည်။ နှစ်ခု၊ သုံး၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ထောင်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်တတိယအခန်းတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းသည်ထိုအချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ယေရှုခရစ်အားဖြင့်၊ “ဘုန်းအသရေတော်နှင့် သူ၏သဏ္ဍာန်တော်” အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား ကိုယ်တော်ကို ထင်ရှားစေသည် (ဟေဗြဲ၊ 1,3) သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ကို သူ၏ခမည်းတော်ဟု ခေါ်သည် (မဿဲ 10,32စာ-၁၁; လုကာ ၂3,34; ယော 10,15) “ငါ့ကိုမြင်သောသူမည်သည်ကား အဘကိုမြင်သည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ (ယော ၁၄:၉)။ “ငါနှင့်ခမည်းတော်သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည်” (ယော ၁၀း၃၀)။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် သောမတ်စ်က သူ့ကို "ကျွန်ုပ်၏သခင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်" ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။ (ယော၊ ၂၀:၂၈)။ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။
ဒါကို ဂျူးဘာသာက လက်မခံနိုင်ဘူး။ “ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏၊၊5. ကြွက် 6,4); Sh'ma မှ ဤဝါကျသည် ဂျူးယုံကြည်ခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ကြာမြင့်စွာကတည်းက တည်စေခဲ့သည်။ သို့သော် ဤတွင် ကျမ်းဂန်များကို နက်နဲစွာနားလည်ပြီး ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသော အံ့ဖွယ်တန်ခိုးများနှင့် တန်ခိုးရှင်တစ်ဦး ရောက်လာသည်။ ဂျူးခေါင်းဆောင်အချို့က သူ့ကို ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ဆရာတစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် (ယော 3,2).
ဒါပေမယ့် ဘုရားသားလား။ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်သာလျှင် သားအဖ တစ်ချိန်တည်းတွင် မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ “အဲဒါကြောင့် ဂျူးတွေက သူ့ကိုသတ်ဖို့ ပိုကြိုးစားကြတယ်” ဟု ဂျိုဟန်နက်စ်ကဆိုသည်။ 5,18“အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ဥပုသ်နေ့ကို ချိုးဖျက်ရုံသာမက ဘုရားသခင်သည် သူ၏အဘဖြစ်တော်မူသည်ဟု လည်း ဆိုခဲ့သည်။” အဆုံးတွင် ယုဒလူများက သူ့အား ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသောကြောင့် သေဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည်– “ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် သူ့ကို တဖန်မေး၍ သင်သည်၊ သင်သည် ခရစ်တော်၊ မြတ်စွာဘုရား၏ သားတော်ဖြစ်သလော။ ယေရှုကလည်း၊ ငါဖြစ်၏။ လူသားသည် တန်ခိုး၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်၍ ကောင်းကင်တိမ်တိုက်များနှင့်အတူ ကြွလာသည်ကို သင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် မိမိအဝတ်ကို ဆုတ်ဖြဲ၍ အဘယ်သက်သေများ လိုသေးသနည်း။ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုသံကို မင်းကြားတယ်။ မင်းရဲ့စီရင်ချက်ကဘာလဲ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိ၏ဟု ရှုတ်ချကြသည်” (မာကု ၁4,61-64) ။
သို့သော် ယေရှုလက်ထက်က ဂရိလူမျိုးတို့ပင် သခင်ယေရှုပြောဆိုချက်ကို လက်မခံနိုင်ပါ။ ဘယ်အရာကမှ မပြောင်းလဲနိုင်သော ထာဝရ-မပြောင်းလဲနိုင်သော အရာနှင့် တဒင်္ဂ-ပစ္စည်းကြားက ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးနိုင်သည် ဟု သူမယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဂရိလူတို့သည် ယောဟန်၏အောက်ပါ လေးနက်သောပြောဆိုချက်ကို လှောင်ပြောင်ကြသည်– “အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၍၊ ဘုရားသခင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်… ထိုအခါ နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိခံယူ၍ ငါတို့တွင်တည်နေသဖြင့် ဘုန်းတော်ကို ငါတို့မြင်ရ၏။ ကျေးဇူးတော်နှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသော ခမည်းတော်ထံမှတပါးတည်းသောသားတော်ကဲ့သို့ ဘုန်းကြီးတော်မူ၏” (ယောဟန်၊ 1,1၊ ၁၄)။ မယုံကြည်သူအတွက် မယုံနိုင်စရာများနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်သည် လူဖြစ်လာပြီး သေရုံသာမက သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့ပြီး သူ၏ ယခင်ဘုန်းအသရေကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။7,5) တမန်တော်ပေါလုက ဘုရားသခင်သည် “ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေ၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ လက်ျာတော်ဘက်၌ တည်စေ” ကြောင်း ဧဖက်အသင်းသားများထံ ရေးခဲ့သည် (ဧဖက် ၁း၂၀)။
ပေါလုသည် ဂျူးများနှင့်ဂရိလူမျိုးများတွင် ယေရှုခရစ်၏စိတ်ပူပန်မှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြသည်– “ကမ္ဘာကြီးသည် ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာဖြင့်ဝန်းရံထားသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ၎င်း၏ဉာဏ်ပညာဖြင့် အသိအမှတ်မပြုသောကြောင့်၊ မိုက်မဲသောတရားဟောခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို နှစ်သက်တော်မူသည်၊ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူတို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတောင်း၍ ဂရိလူတို့သည် ပညာကိုတောင်းသော်လည်း၊1. ကောရိန္သု 1,21စာ-၂၃)။ ခေါ်ဝေါ်ခံရသူများသာ ဧဝံဂေလိတရား၏ အံ့သြဖွယ်သတင်းကို နားလည်လက်ခံနိုင်သည်ဟု ပေါလုဆို၏။ “ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသော ယုဒလူဂရိလူတို့၊ ငါတို့သည် ခရစ်တော်ကို ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ပညာအဖြစ် ဟောပြောကြကုန်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ မိုက်မဲခြင်းသည် လူတို့ထက် ပညာသာ၍ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏ အားနည်းခြင်းသည် လူသားတို့ထက် တန်ခိုးကြီးသည်” (း၂၄-၂၅၊ ) ရောမဘာသာ 1,16 ပေါလုက “… ဧဝံဂေလိတရားကို ငါမရှက်ပါဘူး၊ အကြောင်းမူကား၊ ၎င်းသည် ယုံကြည်သူအားလုံးကို ကယ်တင်သောဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်ဖြစ်သည်၊
ယေရှု၏မြေကြီးအသက်တာတွင်ဘုရားသခင်သည်လူ့ဇာတိကိုခံယူခြင်း၊ လူဟောင်းများ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - သို့သော်မှားယွင်းသော - အတွေးအခေါ်များစွာကိုဘုရားသခင်အဖြစ်၊ ဘုရားသခင်မည်သို့နေထိုင်သည်၊ သူကဓမ်မဟောငျးကမျြးသာမှအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းအမှန်တရားတွေမီးမောင်းထိုးပြ။ ထိုမင်းကပဲမှတဆင့်ကြေညာခဲ့သည်
“ငါသည် လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ဖြစ်သည်” ဟု သူကြွေးကြော်ခဲ့သည်– “အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ ငါ့အားဖြင့် မရောက်” (ယော၊ ၁။4,6) “ငါသည် စပျစ်နွယ်ပင် ဖြစ်သည်၊ သင်သည် အကိုင်းအခက်များ ဖြစ်၏။ ငါ၌နေ၍ ငါသည် အကြင်သူသည် ပြေးတတ်၏၊ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့မရှိဘဲ သင်သည် အဘယ်အရာကိုမျှ မတတ်နိုင်။ စုရုံး၍ မီးထဲသို့ ပစ်ချ၍ မီးရှို့ကြရမည်” (ယော၊ ၁5,5စာ-၆)။ အစောပိုင်းက သူပြောခဲ့သည်– “ငါသည် တံခါးဖြစ်၏၊ အကြင်သူသည် ငါ့အထဲသို့ ဝင်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ယောဟန်၊ 10,9).
သခင်ယေရှုတွင် ပါဝင်သော တစ်ခုတည်းသော အရေးပါအရာရောက်မှုရှိသည်။ 5. ကြွက် 6,4 ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ နေရာတိုင်းတွင် ပဲ့တင်ထပ်ပြောတတ်သည့်အရာသည် လွှမ်းမိုးထားခြင်းမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ပညတ်တရားကို မပယ်ဖျက်ဘဲ ချဲ့ထွင်သကဲ့သို့ (မဿဲ ၅၊ ၁၇၊ ၂၁-၂၂၊ ၂၇-၂၈)၊ ယခု သူသည် “တစ်ဆူတည်း” ဟူသော ဘုရားသခင်ကို လုံးဝမျှော်လင့်မထားသော နည်းလမ်းဖြင့် ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ သူရှင်းပြသည်– တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ရှိသော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ထာဝရတည်ရှိနေပါသည် (ယောဟန်၊ 1,1စာ-၂)။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဇာတိပကတိဖြစ်လာသည် - အပြည့်အဝလူသားဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အပြည့်အဝဘုရားသခင်ဖြစ်သည် - နှင့်၎င်း၏အညီ မြင့်မြတ်သောအခွင့်ထူးအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုက “ဘုရားသဏ္ဍာန်ရှိ၍ ဓားပြတိုက်ခြင်းဟု မမှတ်ယူဘဲ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် သုတ်သင်ပြီး ကျွန်အသွင်ဆောင်၍ လူကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏။
အသွင်အပြင်ကို လူသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချ၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံသည်တိုင်အောင် သေခြင်းတရားကိုနာခံ၏” (ဖိလိပ္ပိ၊ 2,6-8) ။
သခင်ယေရှုသည် လုံး၀လူသားဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးနှင့် အခွင့်အာဏာအားလုံးကို အုပ်စိုးခဲ့သည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြောင့် လူသားဖြစ်တည်မှု၏ ကန့်သတ်ချက်များကို တင်ပြခဲ့သည်။ ဤလူ့ဇာတိခံယူချိန်အတွင်း သားဖြစ်သူသည် ဖခင်နှင့်အတူ “တစ်ထပ်တည်း” ကျန်ခဲ့သည်။ "ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် အဘကိုမြင်လိမ့်မည်။" ယေရှုက (ယော၊ ၁4,9) “ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်။ ငါကြားသည်အတိုင်း ငါစီရင်၍၊ ငါစီရင်ချက်သည် ဖြောင့်မတ်၏၊၊ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ငါ့အလိုကိုမရှာ၊ 5,30) သူကိုယ်တိုင်က ဘာမှမလုပ်ဘဲ သူ့အဖေ သင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြောနေတာပဲလို့ ပြောခဲ့တယ်။ (ယော 8,28).
ကားစင်တင်မခံရမီ မကြာမီတွင် တပည့်တော်များအား “ငါသည် ခမည်းတော်ထံမှထွက်၍ ဤလောကသို့ကြွလာ၍၊ ဤလောကမှထွက်ခွါပြီး ခမည်းတော်ထံသို့ သွားရန်” (ယော ၁း၁)။6,28) ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက် အသေခံရန် မြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာခဲ့သည်။ သူသည် သူ၏ဘုရားကျောင်းကို စတင်ရန်လာခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိတရားကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဟောပြောခြင်းအစပြုရန် သူရောက်လာသည်။ ဘုရားသခင်ကို လူတို့အား ဘော်ပြခြင်းငှါလည်း လာတော်မူ၏။ အထူးသဖြင့်၊ ဘုရားသခင်ဦးခေါင်းတွင်ရှိသော ခမည်းတော်-သားတော် ဆက်ဆံရေးကို လူတို့ကို သတိပြုမိစေခဲ့သည်။
ဥပမာ၊ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် လူသားတို့အား ယေရှုခမည်းတော်အား ဖော်ပြပုံကို ခြေရာခံသည်။ ယေရှု၏ပသခါပွဲများ (ယော ၁၃-၁၇) သည် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ သဘောသဘာဝကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အသိပညာတစ်ခုပါပဲ။ ဘုရားသခင်နှင့် လူသားကြားရှိ ဘုရားအလိုတော်ရှိသော ဆက်ဆံရေးအကြောင်း ယေရှု၏ နောက်ထပ် ပေါ်ထွန်းမှုသည် ပို၍ပင် အံ့ဩစရာပင်။ လူသည် မြင့်မြတ်သောသဘာဝကို စားသုံးနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအား “ငါ့ပညတ်တို့ကို ကျင့်သောသူမည်သည်ကား ငါ့ကိုချစ်၏။ ငါ့ကိုချစ်သောသူမူကား ငါ့ခမည်းတော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံရလိမ့်မည်။4,21) ဘုရားသခင်သည် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကြားရှိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုမှတစ်ဆင့် လူနှင့်သူနှင့် ပေါင်းစည်းလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လုပ်ဆောင်သော လူတို့အား သူ့ကိုယ်သူ ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ ယေရှုဤသို့ဆက်ပြောသည်– “ငါ့ကိုချစ်သောသူမည်သည်ကား ငါ့စကားကိုစောင့်၍ ငါ့အဘသည်ချစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည် သူ့ထံသို့လာ၍ သူနှင့်အတူနေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ ငါ့ကိုမချစ်သောသူမည်သည်ကား ငါ့စကားကိုမစောင့်။ သင်တို့ကြားသည် ငါ့စကားမဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်၏စကားဖြစ်၏။
ရှိသည်” (အခန်းငယ် ၂၃-၂၄)။
ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်၍ ဘုရားသခင်ထံ သစ္စာရှိရှိ အပ်နှံသောသူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ လာပါက ထိုသူ၌ ဘုရားသခင် အသက်ရှင်သည်။ ပေတရုသည် “နောင်တရ၍ သင်တို့၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကို သင်တို့ရရှိကြလိမ့်မည်” (တမန်တော်များ၏တမန်တော်များ၊ 2,38) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်သည်၊၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်အခန်းတွင် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည် ။ ပေါလုသည် ဘုရားသခင်သည် သူ့အထဲ၌ အသက်ရှင်ကြောင်းကို သိခဲ့သည်– "ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့သည်။ ငါအသက်ရှင်သော်လည်း ယခု ငါမဟုတ်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ့အထဲ၌ အသက်ရှင်နေ၏။ ယခု ငါသည် ဇာတိပကတိ၌ အသက်ရှင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်လျက်နေ၏။ “ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အတွက်ကိုယ်ကိုစွန့်” (ဂလာတိ၊ 2,20).
သခင်ယေရှုက ယောဟန် ၃:၃ တွင် ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း လူသားတွင်ရှိသော ဘုရားသခင်၏အသက်တာသည် “အသစ်မွေးဖွားခြင်း” နှင့်တူသည်။ ဤဝိညာဉ်ရေးမွေးဖွားခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၌ အသစ်သောအသက်တာကို စတင်သည်၊ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူများနှင့် အိမ်သူအိမ်သားများ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်လာသည် (ဧဖက် ၂း၁၉)။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “မှောင်မိုက်တန်ခိုးမှ ကယ်တင်” ပြီး “ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်သည့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟူသော ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသော သားတော်၏နိုင်ငံတော်သို့ သွင်းထား” ကြောင်း ပေါလုရေးသားခဲ့သည်။ (ကောလောသဲ၊ 1,13စာ-၁၄)။ ခရစ်ယာန်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ "ချစ်ခင်ရပါသော၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်နေပြီ" (1. ယော ၃:၂)။ သခင်ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်သည် အပြည့်အ၀ ထင်ရှားခဲ့သည်။ “အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားဦးခေါင်းတော်၏ အလုံးစုံသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌တည်၏။” (ကောလောသဲ ၂:၉)။ ဤဗျာဒိတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်မြတ်သောသဘောသဘာဝကို ဆက်ဆံသူများဖြစ်လာနိုင်သည်။
ပေတရုက နိဂုံးချုပ်သည်– “ဘုန်းတန်ခိုးတော်အားဖြင့် ငါတို့ကို ခေါ်တော်မူသောသူကို သိခြင်းအားဖြင့် အသက်နှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း၌ ပြည့်စုံစေသော အရာခပ်သိမ်းသည် ငါတို့ကို ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်အားဖြင့် ပေးတော်မူ၏။ သူတို့အားဖြင့် အမြတ်နိုးဆုံးနှင့် အကြီးမြတ်ဆုံးသော ကတိတော်များကို ငါတို့အား ပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့သည် ဤလောက၏ ဆိုးရွားလှသော အလိုဆန္ဒများမှ လွတ်မြောက်ပြီးသော မြင့်မြတ်သော သဘာဝကို မျှဝေခံစားနိုင်စေရန်၊2. ဓာတ်ဆီ 1,3-4) ။
ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၌မိမိကိုယ်ကိုမည်သို့ထင်ရှားပြခဲ့သနည်း။ သူစဉ်းစား၊ ပြုလေရာရာ၌ဘုရားသခင်၏သွင်ပြင်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ လူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်အောင်ထာဝရအသက်ရရန်ယေရှုသေဆုံးပြီးသေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည်။ ရော ၅း၁၀-၁၁ ကဤသို့ဆိုထားသည် -“ ငါတို့သည်ရန်သူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားသခင်၏သားတော်အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်နှင့်မိ have ဟာယဖွဲ့တော်မူသည်မှန်လျှင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်မိ bo ဟာယဖွဲ့ရာကျေးဇူးကိုယခုခံပြီးလျှင်၊ ထိုသခင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။
လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် အမျိုးသားရေး ဝိညာဉ်ရေးအသိုက်အဝန်းသစ်ကို တည်ထောင်ရန် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ကို ယေရှု ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - ဘုရားကျောင်း (ဧဖက်၊ 2,14စာ-၂၂)။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်အား ခရစ်တော်၌ တဖန်မွေးဖွားခြင်းအတွက် လူသားအားလုံး၏ဖခင်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏လူတို့ကို ကတိပြုထားသော ဘုန်းကြီးသောကံကြမ္မာကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်၏မျက်မှောက်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုအနာဂတ်ဘုန်းအသရေကို အရသာပေးနေပြီဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် “ကျွန်ုပ်တို့၏အမွေခံကတိခံ” (ဧဖက် 1,14).
သခင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်တစ်ပါးတည်းရှိခြင်းအားဘုရားသခင်တစ်ပါးအဖြစ်တည်ရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ထာဝရကိုးကွယ်ရာအရှင်၌ကွဲပြားခြားနားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများကိုဖော်ပြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်၏ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအမည်များကိုခရစ်တော်အတွက်အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်ခရစ်တော်မည်သို့ဖြစ်ကြောင်းကိုသာမကဘုရားသခင်မည်သို့ပါရှိကြောင်းကိုလည်းသက်သေခံခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာသခင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သူနှင့်ခမည်းတော်သည်တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့်မည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သောအခါဘုရားသခင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်း၏အယူဝါဒကို အလျှော့မပေးဘဲ ကိုယ်စားပြုသည်။ သခင်ယေရှု၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းနှင့် အလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်း၏ "မည်ကဲ့သို့" ကို နက်နဲစွာ ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး ခမည်းတော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသကဲ့သို့၊ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်အဖြစ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည်—ဘုရားသခင့်အဖြစ်၊ ဆိုလိုသည်မှာ- သမ္မာကျမ်းစာသည် ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ် ထာဝစဉ်တည်ရှိသော ဘုရားသခင်တစ်ပါးကို ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်အား “ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌” နှစ်ခြင်းခံသင့်သည် (မဿဲ ၂။8,19).
ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ဤကျမ်းစာအမှန်တရားများကိုနားလည်ရလွယ်ကူသောရှင်းပြချက်ပုံစံများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်များကိုဆန့်ကျင်။ “ နောက်တံခါး” မှတဆင့်သွားသောကြေညာချက်များကိုလက်မခံရန်သတိပြုရမည်။ အကြောင်းမှာရှင်းလင်းချက်အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်၏မြင်သာထင်သာသောပလတ်စတစ်ပုံရိပ်ကိုပေးသဖြင့်ကိစ္စရပ်များကိုရိုးရှင်းစေနိုင်သည်။ သို့သော် ဦး ဆုံးအနေနှင့်၎င်းသည်ဖော်ပြချက်သည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိ၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရဘုရားသခင်၊ သူတို့လုပ်နိုင်သကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
"သုံးတစ်ခုစီ" "သုံးတစ်ခုစီ" ဟူသည်လူ့ယုတ္တိဗေဒနှင့်ဆန့်ကျင်သောအတွေးအခေါ်များဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်များထဲသို့“ မကွဲမဖွားဘဲ”“ ဘုရားသခင်တစ်လုံးတစ်ဝတည်း” ဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ကူးရန်အတော်လေးလွယ်ကူလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာ၏ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်ရိုးရှင်းသောရုပ်ပုံကား“ ဘုရားမိသားစု” ဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ထက်မကပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့်သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ဘုရားသခင်ဟာငါတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ဖွင့်ဟချက်မပါဘဲတီထွင်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့လုံးဝမတူပါ။
ဘုရားသခင်သည်မိမိအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာထုတ်ဖော်ပြသပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုမရှင်းပြနိုင်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစမရှိဘဲဘုရားသခင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုကျေနပ်လောက်အောင်ရှင်းပြ။ မရပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအတွေးအခေါ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန့်သတ်ချက်ရှိသောမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြ။ မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်အစမရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်တစ် ဦး တည်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်းရှိသည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြသည်။
တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ 5,3-၄ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား “ဘုရားသခင်” ဟုခေါ်သည်– “ပေတရုက၊ အာနနိ၊ သင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လိမ်လည်၍ လယ်အတွက် ငွေအချို့ကို သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့် စာတန်သည် အဘယ်ကြောင့် သင့်နှလုံးကို ဖြည့်ခဲ့သနည်း။ ရောင်းပြီးတဲ့အခါ လိုချင်တာကို မလုပ်နိုင်သေးဘူးလားလို့ စိတ်ထဲမှာ ဘာကြောင့် ဒီလို ကြံစည်ခဲ့တာလဲ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှေ့တွင် အာနနိ၏လိမ်လည်မှုသည် ပေတရု၏အဆိုအရ၊ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မုသာဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သာလျှင် ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သဗ္ဗညုတဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အား ဘော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားဦးခေါင်း၏ နက်နဲရာအရပ်အပါအဝင် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို စစ်ကြောတော်မူ၏။1. ကောရိန္သု 2,10).
ထို့အပြင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အလုံးစုံတည်ရှိပြီး မည်သည့်နေရာဒေသကန့်သတ်ချက်နှင့်မျှ ချည်နှောင်ထားခြင်းမရှိပါ။ “သို့​မ​ဟုတ် သင်​တို့​၏​ကိုယ်​ခန္ဓာ​သည် သင်​တို့​အ​ထဲ​၌​ရှိ​၍​ဘု​ရား​သ​ခင်​ထံ​တော်​မှ​ရ​ရှိ​သော သန့်​ရှင်း​သော​ဝိ​ညာဉ်​တော်​၏​ဗိ​မာန်​ဖြစ်​သည်​ကို သင်​တို့​မသိ​ကြ​သ​လော။ (1. ကောရိန္သု 6,19) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူတိုင်းတွင် ကျိန်းဝပ်သောကြောင့် တစ်နေရာတည်းတွင် ကန့်သတ်မထားပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ခရစ်ယာန်များကို အသစ်ပြုပြင်ပေးသည်။ "လူတစ်ဦးသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မှ မွေးဖွားလာခြင်းမရှိပါက၊ ထိုသူသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မ၀င်ရောက်နိုင်ပေ။ လူ့ဇာတိမှ မွေးဖွားလာသောအရာသည် အသားဖြစ်သည်၊ ဝိညာဉ်တော်မှ မွေးဖွားလာသောအရာသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏... လေသည် သူအလိုရှိရာအရပ်သို့ လာလေလေ၊ သူ၏သံသံကိုကြားနိုင်သော်လည်း သူဘယ်ကလာသနည်း၊ သူဘယ်ကိုသွားနေသည်မသိ။ ထို့ကြောင့် ဝိညာဉ်တော်မွေးဖွားသူတိုင်းတွင် ရှိနေသည်” (ယောဟန်၊ 3,5စာ-၆၊ ၈)။ သူသည် အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်းသည်။ “သို့သော် ဝိညာဉ်တော်သည် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အချို့သောသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းမှ ဝေးကွာ၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဝိညာဉ်များနှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအယူဝါဒများကို စွဲကိုင်ကြလိမ့်မည်” (1. တိမောသေ 4,1) ဗတ္တိဇံပုံသေနည်းတွင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်နှင့်တူညီသောအဆင့်တွင်ထားရှိသည်- ခရစ်ယာန်သည် "ခမည်းတော်၏သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌" နှစ်ခြင်းခံရမည် (မဿဲ ၂။8,19) ဝိညာဉ်တော်သည် မည်သည့်အရာမှ မဖန်တီးနိုင်ပါ။ (ဆာလံ ၁၀4,30) ဘုရားသခင်သာလျှင် ထိုသို့သော ဖန်တီးမှုလက်ဆောင်များ ရှိသည်။ ဟီး 9,14 နာမ်ဝိညာဉ်အား "ထာဝရ" ပေးသည်။ ဘုရားသခင်သာလျှင် ထာဝရဖြစ်တော်မူ၏။
ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် သခင်ယေရှုသည် ၎င်းတို့နှင့်အတူ “ထာဝရတည်နေမည့်” လောကီသားတို့ကို မမြင်နိုင်၍ မသိနိုင်သော သမ္မာတရား၏ဝိညာဉ်ကို စေလွှတ်တော်မူမည်ဟု တမန်တော်များအား ကတိပြုခဲ့သည်။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် သင်၌တည်၍ သင်၌ရှိလိမ့်မည်” (ယော ၁၄:၁၆-၁၇)။ သခင်ယေရှုက ဤ "ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ" ကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အဖြစ် အတိအကျ သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့သည်- "ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့နာမကိုအမှီပြု၍ စေလွှတ်တော်မူသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မူကား၊ သင်တို့အား ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သွန်သင်၍၊ ငါပြောသမျှကို သတိရစေလိမ့်မည်" (း၂၆)။ . ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် လောကီသားတို့၏ အပြစ်များကို ပြပြီး သမ္မာတရားအားလုံးကို လမ်းညွှန်ပေးတော်မူ၏။ အလုံးစုံသောအမှုတို့ကို ဘုရားသခင်သာလျှင် ပြုနိုင်၏။ ပေါလုဤသို့အတည်ပြုခဲ့သည်– “ငါတို့သည် စကားဖြင့်မြွက်ဆိုသည်သာမက၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သွန်သင်၍၊ ဝိညာဏဝိညာဏအားဖြင့် အနက်ပြန်သည်” (1. ကောရိန္သု 2,13၊ Elberfeld သမ္မာကျမ်းစာ)။
ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် - ဘုရားသခင်တပါးတည်း
ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိနားလည်သောအခါတွင်၊ ခမည်းတော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး သားတော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သကဲ့သို့ တမန်တော် 1 ကဲ့သို့ ကျမ်းပိုဒ်များကို ရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မခဲယဉ်းပါ။3,2 “ထာဝရဘုရား၏အစေကိုခံ၍ အစာရှောင်ကြသောအခါ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က၊ ဗာနဗနှင့် ရှောလုတို့ကို ငါခေါ်သောအမှုကို ပိုင်းခြားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။” သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုကာ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ရှောလုသည် ငါခေါ်သောအလုပ်၌ “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှု၌၊ လုကာသည် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကို တိုက်ရိုက်မြင်သည်။
ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ပြလိုက်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်လက်ဆောင်များကိုပြောသည့်အခါ၊ ပေးပို့သည်၊ မှုတ်သွင်းခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကသီးခြားသတ္တဝါသုံးပါးမဟုတ်ဘူး၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကသီးခြားဘုရားသခင်မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင်၏အလိုတော်၊ ခမည်းတော်၏အလိုတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလိုတော်အတူတူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ် ဦး သို့မဟုတ်သုံး ဦး ထက်မပိုသောသူတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပြီးပြည့်စုံသောသဟဇာတဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ယင်းအစား၎င်းသည်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်
နှင့်အလိုတော်။ သားတော်သည်ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်မြေကြီးပေါ်ရှိခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုပြီးမြောက်စေရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏သဘောသဘာဝနှင့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
ပေါလု၏အဆိုအရ “သခင်သည် ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏” ဟူ၍ ရေးသားထားပြီး “ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်” ဟုရေးသားခဲ့သည်။2. ကောရိန္သု 3,17စာ-၁၈)။ အခန်းငယ် ၆ တွင် “ဝိညာဉ်တော်သည် အသက်ကိုပေးသည်” ဟုပင်ဆိုထားပြီး၊ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်သာလျှင် တတ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်နိုင်စေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခမည်းတော်ကိုသာ သိသည်။ သခင်ယေရှုနှင့် ခမည်းတော်သည် ငါတို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသော်လည်း ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၌ ကျိန်းဝပ်သောကြောင့်သာဖြစ်သည် (ယော၊ ၁4,16စာ-၁၇.၂၃; ရောမ 8,9စာ-၁၁)။ ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောအခါတွင် ခမည်းတော်နှင့် သားတော်သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ရှိနေပါသည်။
In 1. ကောရိန္သု ၁2,4-၁၁ ပေါလုသည် ဝိညာဉ်တော်၊ သခင်နှင့် ဘုရားသခင်ကို ညီမျှစေသည်။ အပိုဒ်ငယ် 11 တွင် သူရေးထားသည်မှာ "အားလုံး၌အလုပ်လုပ်သော ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်း" ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အခန်းငယ်အချို့က ဤသို့ဆိုသည်– "ဤအရာအားလုံးသည် တစ်ခုတည်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြီးသည်" ဟုဆိုကာ "သူ [ဝိညာဉ်] အလိုတော်ရှိသည်" ဟုဖော်ပြထားသည်။ စိတ်က တစ်ခုခုကို ဘယ်လိုလိုချင်တာလဲ။ ဘုရားဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်။ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိသောကြောင့်၊ ခမည်းတော်၏အလိုတော်သည် သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလိုတော်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုအလေးအနက်ထား။ သီးခြားလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခြင်းမပြုရ။ ဘုရား၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရား၊
ဝိညာဉ်တစ်ခုတွင်ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော ဘုရားသခင် (သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်) သည် ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ (သားတော်ကဲ့သို့) သည် “မိမိအကြောင်း” ကို မပြောတတ်ပါ။ (ယော၊ ၁6,13) ဒါပေမယ့် ဖေဖေပြောတဲ့အတိုင်း ပြောပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်တိုင်မဟုတ်ဘဲ သားတော်အားဖြင့် ခမည်းတော်ထံသို့ ရည်ညွှန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံ ဆုတောင်းခြင်းလည်းမပြုပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏အထဲရှိ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပင် ဆုတောင်းပေးသည် (ရောမ၊ 8,26).
ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၌မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံ မည်သည့်အခါမျှ ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် သို့မဟုတ် သားတော် (ထိုသူ) ကို သိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့်၊ ငါတို့သည် ငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြမည်။ ငါတို့ရသောအသီးသည် ငါတို့၏အသီးမဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်တော်၏အသီးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိပါက ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်ထူးကြီးကို ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခမည်းတော်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီးအရာခပ်သိမ်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ သားတော်သည်ရွေးနုတ်ရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်၊ ဘုရားသခင်ကအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းသောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်နှစ်သိမ့်ပေးသူ၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သားတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခမည်းတော်၊ သားများနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်အတွက်သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုသက်ရောက်စေပြီးလမ်းခရီးနှင့်တံခါးဝဖြစ်သောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး ဆောင်စေသည်။ ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့သည် ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ပေးသောဆုကျေးဇူးများဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မိမိအားမိမိကိုပြသောဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်း၏လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဓမ္မဟောင်း၏ဘုရားသခင် မှလွဲ၍ အခြားဘုရားမဟုတ်သော်လည်းဓမ္မသစ်ကျမ်း၌သူ၏အကြောင်းကို ပို၍ ထင်ရှားစေသည်။ သူသည်ငါတို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံရန်၊ ဘုန်းအသရေ၌ထမြောက်စေတော်မူပြီ။ ငါတို့အတွင်း၌ နေ၍၊ အမှန်တရားအလုံးစုံကိုလမ်းပြလိမ့်မည်၊ လက်ဆောင်များ ပေး၍ ခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များကို ဘုရားသခင်ဖြေကြားပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤပန်းတိုင်သို့ ပို့ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤပန်းတိုင်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမည့် လမ်းကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ဘုရားသခင် (ခမည်းတော်)ထံ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ ဆုတောင်းရန် လှုံ့ဆော်ပေးသော ဘုရားသခင် (သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်) ဖြစ်သည်။ ၎င်းပြင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုပန်းတိုင်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသော (သားတော်) လမ်းလည်းဖြစ်သည်။
ဖခင်သည်ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သားတော်သည်လူသားတို့အတွက်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကယ်တင်ခြင်း၏ကောင်းချီးများဖြစ်သောဆုကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောယုံကြည်သူများ၏အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်တစ်ခုတည်းသောဘုရားသခင်၊ သမ္မာကျမ်းစာတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့သားများထံ ဒုတိယစာတစ်စောင်ကို ကောင်းချီးပေးသည်- "ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျေးဇူးတော်၊ ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုး၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆက်ဆံခြင်းသည် သင်တို့အားလုံး၌ရှိစေသတည်း!" (2. ကောရိန္သု ၁3,13) ပေါလုသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ပေးသော ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် အပ်နှင်းထားသည့် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်၊ ဘုရားသခင်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပေးဆောင်တော်မူသော အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊
လူများစွာသည်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာပြောဆိုရာကိုမရေရာသောစိတ်ကူးထားကြသည်။ အများစုကဒါကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမစဉ်းစားကြဘူး။ အချို့ကလွတ်လပ်သောသတ္တဝါသုံးပါးကိုစိတ်ကူးကြသည်။ သုံးခေါင်းနှင့်အတူအချို့သောဖြစ်လျက်ရှိ; အခြားသူများမှာမူခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သို့လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောပုံများမှရွေးချယ်မှုသေးငယ်သည်။
လူအများတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းစာသွန်သင်ချက်ကို“ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ”၊ “ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ” သို့မဟုတ်“ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းများဖြင့်အနှစ်ချုပ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်သို့ဆိုထားသည်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာမေးမြန်းသောအခါသူတို့သည်များသောအားဖြင့်ရှင်းပြချက်တစ်ခုရလေ့ရှိသည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအများအပြားသည်ရွှံ့စေးပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်း၏အရေးကြီးသည့်အကြောင်းရင်းမှာလူပုဂ္ဂိုလ်ဟူသောအသုံးအနှုန်းတွင်တည်ရှိသည်။
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ ဂျာမန်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အများစုတွင် သုံးသော "လူ" ဟူသောစကားလုံးသည် သတ္တဝါသုံးပါးကို ညွှန်ပြသည်။ ဥပမာများ- "ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးတွင် တည်ရှိသည်... တစ်ဆူတည်းသော နတ်သဘာဝ... ဤပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (အစစ်အမှန်) ကွဲပြားသည်" (Rahner / Vorgrimler, IQ einer Theologisches Wörterbuch, Freiburg 1961, p. 79) . ဘုရားသခင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ "လူ" ဟူသော စကားလုံး၏ ဘုံအဓိပ္ပါယ်မှာ လွဲမှားနေသော ရုပ်ပုံလွှာကို ဖော်ပြသည်- ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် အကန့်အသတ်နှင့် သူ၏ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ ဟူသော အမှီအခိုကင်းသော သတ္တဝါသုံးပါး ပါ၀င်သည်ဟူသော အချက်မှ ထွက်ပေါ်လာသည်။ အဲဒါ မဟုတ်ဘူး။
ဂျာမန်ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်လူပုဂ္ဂိုလ်မှလက်တင်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆင်းသက်လာသည်။ ဘာသာရေးပညာရှင်များ၏လက်တင်ဘာသာစကားတွင် persona သည်ဖခင်၊ သားများနှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်များအတွက်သတ်မှတ်ချက်အရအသုံးပြုသော်လည်းယနေ့ခေတ်ဂျာမန်စကားလုံး“ person” ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၏အခြေခံအဓိပ္ပာယ်ကို "မျက်နှာဖုံး" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံဆောင်သဘောအရ၎င်းသည်ပြဇာတ်၏အခန်းကဏ္describedကိုဖော်ပြသည်။ ထိုအချိန်ကသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး သည်အခန်းကဏ္ in တော်တော်များများတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သီးသန့်မျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဝေါဟာရသည်ပင်သတ္တဝါသုံးပါး၏မှားယွင်းသောရုပ်ပုံကိုခွင့်မပြုသော်လည်းဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်၍ အားနည်းနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်ထည့်သွင်းထားသောအခန်းကဏ္ just များမျှသာမဟုတ်ဘဲ၊ သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အခန်းကဏ္ play တစ်ခုတည်းသာပါဝင်နိုင်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်များဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်တင်ဘာသာရေးပညာရှင်သည် persona ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုသောအခါမှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာနားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ယနေ့အချိန်၌ပင် "လူ" ဟူသောစကားလုံးသည်ဘုရားသခင်အားရည်ညွှန်းသည်။ လူတစ် ဦး သည်“ လူ” အောက်တွင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုကို“ လူ” အောက်တွင်ဖော်ပြခြင်းနှင့်မတူပါကအလွယ်တကူလမ်းလွဲသွားစေသည်။ နတ်ဘုရားလူ့အာရုံ။
ငါတို့ဘာသာစကားဖြင့်လူသုံးယောက်တွင်တစ်ပါးတည်းသောဘုရားသခင်ကိုပြောသောသူသည်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သီးခြားလွတ်လပ်သောဘုရားသုံးပါးကိုမမြင်နိုင်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်သူသည်“ လူ” နှင့်“ ဖြစ်ခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရများကိုခွဲခြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဤသို့ဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားတစ်ပါးတည်းသာသုံးပါးမဟုတ်ပါ။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သမ္မာကျမ်းစာတစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းဖြစ်ခြင်း၏ထာဝရပုံစံတစ်ခုအဖြစ်နားလည်ရန်သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြသည်။
ဘုရားသခင်သည် “တစ်ဆူတည်း” နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် “သုံး” ဟူသော သမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားကို ဖော်ပြလိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသုံးဆူ သို့မဟုတ် အမှီအခိုကင်းသော နတ်ဗြဟ္မာသုံးပါးရှိကြောင်း မထင်မှတ်ထားသော ဝေါဟာရများကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင်ရဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်မှုကို အလျှော့မပေးဘူးလို့ တောင်းဆိုထားတယ်။ ပြဿနာမှာ- ဖန်တီးထားသော အရာများကို ရည်ညွှန်းသည့် စကားလုံးတိုင်းတွင်၊ လှည့်စားနိုင်သော အဓိပ္ပာယ် အစိတ်အပိုင်းများသည် ညစ်ညမ်းသော ဘာသာစကားမှ ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။ "လူ" ဟူသော စကားလုံးအပါအဝင် စကားလုံးအများစုသည် ဖန်ဆင်းခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ဘုရားသခင်၏သဘာဝကို ဆက်စပ်နေတတ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားလုံးများအားလုံးသည် ဖန်တီးထားသောအမိန့်နှင့် ပတ်သက်မှုအချို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အကြောင်း လူ့အသုံးအနှုန်းဖြင့် ပြောဆိုသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလိုရင်းနှင့် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုကြောင်းကို အတိအကျရှင်းလင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ အထောက်အကူဖြစ်စေသောစကားလုံး—ဟေဗြဲ ၁ တွင် ဘုရားသခင်၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကို ဂရိစကားပြောခရစ်ယာန်များက ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် စကားလုံးပုံ-ပုံတစ်ပုံကို တွေ့ရသည်-3. ဤကျမ်းပိုဒ်သည် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် မှတ်သားစရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဤသို့ဖတ်ရသည်– "သူ [ဘုရားသခင်၏] ဘုန်းအသရေတော်နှင့် သူ၏သဏ္ဍာန်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်၍ တန်ခိုးကြီးသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် အရာခပ်သိမ်းကို ခံယူသည်..." "ဘုန်းတော်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း [သို့မဟုတ် emanation]" စကားစုမှ ကျွန်ုပ်တို့၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများစွာကို ကောက်ချက်ချနိုင်သည်- သားသည် ဖခင်နှင့် သီးခြားဖြစ်တည်မှု မဟုတ်ပါ။ သားတော်သည် ခမည်းတော်ထက် မနည်းသော ဘုရားဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ရှိသကဲ့သို့ သားတော်သည်လည်း ထာဝရဖြစ်တော်မူ၏။ တစ်နည်းဆိုရသော် သားသည် ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း သို့တည်းမဟုတ် ရောင်ခြည်တော်သည် ဘုန်းအသရေနှင့် ဆက်စပ်နေသကဲ့သို့ ဖခင်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်- ထွန်းလင်းသော အရင်းအမြစ်မရှိ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်မရှိ၊ တောက်ပသော အရင်းအမြစ်မရှိပေ။ သို့တိုင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်နှင့် ထိုဘုန်းအသရေ၏ ထွက်ပေါ်မှုကို ပိုင်းခြားရပါမည်။ ကွဲပြားသော်လည်း သီးခြားမဟုတ်ပါ။ ထပ်တူထပ်မျှ မှတ်သားစရာမှာ "ရုပ်ပုံ [သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်၊ တံဆိပ်တုံး၊ ရုပ်ပုံ]" ဟူသော စကားစုဖြစ်သည်။ အဖေက သားကို အပြည့်အ၀ ထုတ်ဖော်တယ်။
မူရင်းစာသား၏ "အနှစ်သာရ" နောက်ကွယ်မှရပ်နေသောဂရိစကားလုံးကိုယခုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြည့်ကြစို့။ ဒါဟာ hypostasis ပါပဲ။ ၎င်းကို hypo = "under" နှင့် stasis = "stand" ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး "တစ်ခုခုအောက်တွင်ရပ်တည်" ၏အခြေခံအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ - ငါတို့ပြောချင်သလိုပြောတာ - "နောက်ကွယ်" ဆိုတာဘာလဲ၊ Hypostasis ကိုအခြားတစ်ခုမဖြစ်နိုင်သည့်အရာဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို "ဖြစ်တည်မှုအကြောင်းပြချက်"၊
"Hypostasis" (အများကိန်း- "hypostasis") သည် ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ရည်ညွှန်းရန် ကောင်းသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သမ္မာကျမ်းစာသုံးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်သဘာဝနှင့် ဖန်ဆင်းခြင်းကြားတွင် ပိုမိုပြတ်သားသော အယူအဆပိုင်းခြားမှုကို ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်၊ (မရှိမဖြစ်) လိုအပ်ချက်မှာ စကားလုံးကို လူသား၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသဘောအရ နားမလည်သောကြောင့် “လူ” သည်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။
“လူ” သည် မှန်ကန်စွာ နားလည်နိုင်သော အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဟု ဆိုခြင်းသည် မှားပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောက်တစ်လုံး သို့မဟုတ် အပင်ကို မကိုးကွယ်ဘဲ “စကြဝဠာနောက်ကွယ်တွင်” မဟုတ်ဘဲ “သက်ရှိထင်ရှားရှိသူ” ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် “လူများဖြစ်သည်” ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသော ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါ။ “အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ဘုရားသခင်မဟုတ်၊ လူမဟုတ်၊ သင်တို့တွင် သန့်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်၏” (ဟောရှေ ၁၁:၉)။ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းရှင်—ဖန်ဆင်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပေ။လူများသည် အသက်၏အစ၊ ကိုယ်ခန္ဓာရှိ၍ ကြီးပွား၊ တစ်ဦးချင်း ကွဲပြားကြပြီး အသက်အရွယ်အားဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် သေကြသည်။
ဘုရားသခငျသညျဘာသာစကားမျိုးပွားနိုင်သမျှထက်ကျော်လွန်ပြီးအဆုံးမဲ့သွားသည်; သို့ရာတွင်သူသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည်။ သူသည်မိမိအကြောင်းများစွာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်လူ့အသိပညာထက်ကျော်လွန်သောအရာအားလုံးကိုသူတိတ်ဆိတ်စွာမထားပါ။ ကန့်သတ်သတ္တဝါများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုမရနိုင်ပါ။ သူ၏ဖွင့်ပြချက်အရဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန့်သတ်ချက်များ ဖြစ်၍ သူသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုအပြည့်အဝမသိနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အကြောင်းပြသခဲ့သည့်အရာသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ အရေးကြီးတယ်
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို “ကျေးဇူးတော်နှင့် သိကျွမ်းခြင်း၌ တိုးပွားစေခြင်းငှာ ငါတို့၏သခင်ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်သောသခင်” (2. ဓာတ်ဆီ 3,18) သခင်ယေရှုက “ဤကား ထာဝရအသက်ပေတည်းဟူသော၊ ကိုယ်တော်တပါးတည်းသာလျှင် စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်း၊ စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော သင်တို့ကို၎င်း သိကြ၏" (ယော ၁၇း၃)။ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုသိလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသေးငယ်ပြီး ကိုယ်တော်သည် မည်မျှကြီးမားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား သိသာထင်ရှားစေသည်။
ဤဘရိုရှာ၏ နိဒါန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ မေးနိုင်စေမည့် အခြေခံမေးခွန်းများကို ပုံဖော်ရန် ကြိုးစားထားပါသည်။ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး လွတ်လွတ်လပ်လပ် မေးနိုင်ရင် ဘာမေးမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေးခွန်းက "မင်းဘယ်သူလဲ" စကြဝဠာကို ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် အုပ်စိုးရှင်က “ငါဖြစ်မည် ငါဖြစ်မည်” (2. ကြွက် 3,14) သို့မဟုတ် "ငါသည် ငါဖြစ်၏" (လူစုလူဝေး ဘာသာပြန်သည်)။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းခြင်းတွင် သူ့ကိုယ်သူ ရှင်းပြသည် (ဆာလံ ၁9,2) သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းချိန်မှစ၍၊ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တခါတရံ မိုးခြိမ်းသံ၊ မုန်တိုင်းကဲ့သို့၊ မြေငလျင်နှင့် မီးကဲ့သို့၊ တစ်ခါတစ်ရံ “တိတ်ဆိတ်၍ သိမ်မွေ့သော ဟောက်သံ” ကဲ့သို့ (2. မောရှေ ၂၀:၁၈; 1. ဘုရင်များ ၁9,11စာ-၁၂)။ သူသည်ပင် ရယ်သည် (ဆာလံ ၂း၄)။ သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့အကြောင်းပြောပြီး သူနှင့်တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ရသူများအပေါ် သူ၏အထင်အမြင်ကို ဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်မည်သူဖြစ်သည်ကို သိရုံမျှမကပါ။ ငါတို့ကို သူဘာအတွက် ဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲ သိချင်တယ်။ သူ့အစီအစဥ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် သိချင်တယ်။ ငါတို့အတွက် အနာဂတ်က ဘာကို သိမ်းဆည်းထားလဲ သိချင်တယ်။ ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည် အဘယ်နည်း။ ငါတို့မှာ ဘယ် "" ရှိသင့်လဲ။ ပြီးတော့ ငါတို့အနာဂတ်မှာ ဘယ်ဟာရှိမလဲ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။1. ကြွက် 1,26စာ-၂၇)။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်အတွက်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလွန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအခါ အကန့်အသတ်ရှိသောသတ္တဝါများ အိပ်မက်မက်နိုင်သည်ထက် များစွာမြင့်မားသောအရာများကို ဖော်ပြသည်။
ဟီး 2,6-11 က ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိတွင် ကောင်းကင်တမန်များထက် အနည်းငယ်နိမ့်ကျသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ချီးမွမ်းဂုဏ်အသရေဖြင့် သရဖူဆောင်း” ပြီး ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့လက်အောက်ခံစေခဲ့သည်။ အနာဂတ်အတွက်မူ "သူ၏လက်အောက်ခံမဟုတ်သောအရာကို ဖယ်ထုတ်တော်မမူ။ သို့သော်လည်း အရာအားလုံးသည် သူ့လက်အောက်ခံဖြစ်သည်ကို ငါတို့မမြင်ကြသေးပါ။" ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထာဝရ ဘုန်းကြီးသော အနာဂတ်ကို ပြင်ဆင်ပေးထားသည်။ ဒါပေမယ့် လမ်းမှာ တစ်ခုခုတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ရှိသောအခြေအနေတွင်ရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ဖြတ်တောက်သွားသည် (ဟေရှာယ ၅၉း၁-၂)။ အပြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် မကျော်လွှားနိုင်သော အတားအဆီးဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြား မဖြတ်နိုင်သော အတားအဆီးတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
သို့သော် အခြေခံအားဖြင့် ချိုးခြင်းသည် သက်သာနေပြီဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သေခြင်းကို မြည်းစမ်းခဲ့သည် (ဟေဗြဲ 2,9) “များစွာသောသားတို့ကို ဘုန်းအသရေသို့ပို့ဆောင်” ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောသေဒဏ်ကို ပေးဆောင်ခဲ့သည် (း၁၀)။ ဗျာဒိတ် ၂၁:၇ အရ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သားအဖဆက်ဆံရေးတွင် သူနှင့်အတူရှိစေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ရေးသားသူအဖြစ် သူလုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်- ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရုပ်ပုံများဟုခေါ်ဆိုရန် မရှက်ပါ (ဟေဗြဲ၊ 2,10-11) ။
တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ 2,38 ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို နောင်တရရန်နှင့် ပုံဆောင်သဘောဖြင့် နှစ်ခြင်းခံရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်သည် ၎င်းတို့၏ ကယ်တင်ရှင်၊ သခင်နှင့် ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သူတို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးတော်မူသည် (ဂလာတိ) 3,2စာ-၅)။ ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လှမ်းခဲ့ဖူးသော တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော၊ လောကီအပြစ်ရှိသောနည်းလမ်းများကို ကျောခိုင်းကာ နောင်တရသောအခါတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိသောသူနှင့် ဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုသို့ ခြေလှမ်းလှမ်းလာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည် (Johannes 3,3) ခရစ်တော်၌ အသက်တာသစ်ကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အား ပေးဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် ကရုဏာတော်အားဖြင့်၊ ခရစ်တော်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကို အားဖြင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်? ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကို ကျေးဇူးတော်နှင့် သိကျွမ်းခြင်း၌ ကြီးပွားခြင်း” (2. ပေတရု ၃:၁၈) အသက်​ဆုံး​သည်​အထိ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမထမြောက်ခြင်းတွင် ပါဝင်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး ထို့နောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် “ထာဝရဘုရားနှင့်အတူ အချိန်တိုင်းရှိ” လိမ့်မည် (1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,13-17) ။
ဘုရားသခင်သည် “ယေရှုခရစ်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းမှ၊ ဖောက်ပြန်၍မွမ်းမံ၍ မပျက်စီးနိုင်သော အမွေခံအဖြစ်၊ အသက်ရှင်သောမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ငါတို့ကို ပြန်လည်မွေးဖွားစေသည်” ဟူသည့် “ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် … နောက်ဆုံး၌ထင်ရှားပေါ်လွင်စေမည့်အမွေ” နေ့ရက်များ" (1. ဓာတ်ဆီ 1,3စာ-၅)။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မသေနိုင်သော (1. ကောရိန္သု ၁၅:၅၄) “ဝိညာဏကိုယ်” (အခန်းငယ် ၄၄) ကိုရရှိသည်။ “ထို့ပြင် ငါတို့သည် မြေကြီး [လူသား-အာဒံ] ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဆောင်ခဲ့ကြသည်နှင့်အမျှ၊ အခန်းငယ် ၄၉ က၊ “ကောင်းကင်ဘုံ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ငါတို့လည်းထမ်းရကြမည်။ “ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏သားသမီးများ” အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သေခြင်း၏လက်အောက်ခံမဟုတ်တော့ပါ (လုကာ ၂၀း၃၆)။
ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ပြောထားတဲ့အရာထက် ကိုယ်တော်နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးက ဘယ်အရာကမဆို ပိုဘုန်းကြီးနိုင်မလား။ ငါတို့သည် “သူ [ယေရှု] ကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ထိုသူကို မြင်ကြလိမ့်မည်” (1. ဂျိုဟန် 3,2) ဗျာဒိတ် ၂၁:၃ က ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်၏ခေတ်အတွက် ကတိပြုသည်– “ဘုရားသခင်၏တဲတော်သည် လူတို့နှင့်အတူနေ၍၊ သူတို့နှင့်အတူ ကျိန်းဝပ်တော်မူလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ် ... "
ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ စုံလင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သူ၏မသေနိုင်သောသားသမီးများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်မိသားစုကိုအပြည့်အဝအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြမည်။ ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်း၌၎င်း၊ အဘယ်အရာကိုအလွန်ကြီးစွာသောနှင့်ဖှယျတ ဦး တည်း